Is “sorry” really enough? – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Is “sorry” really enough?
တစ်ခါက ကျွန်တော် ရေးခဲ့ဖူးပါသည်။ မဖတ်ဖြစ်လိုက်သူများအတွက် တစ်ခါ ပြန်ရေးပြပါရစေ။
၁၉၉၁ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃ရက်နေ့တွင် ကျွန်တော့်သားငယ်ကို ဖွားမြင်ခဲ့ပါသည်။ သမီးကြီးကို မွေးဖွားစဉ်ကတည်းက ဗိုက်ခွဲပြီး မွေးခဲ့သော အစဉ်အလာ ရှိသဖြင့် သားငယ်ကို မွေးသောအခါတွင်လည်း မအေ့ဝမ်းကြာ တိုက်ကို ခွဲစိတ်ကာ မွေးယူခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ ခွဲစိတ်ရာတွင် ခွဲစိတ်မှုကို ဆောင်ရွက်သူ တာဝန်ကျဆရာဝန်က လက်လွန်ပြီး ဇနီးသည်၏ ဝမ်းကြာတိုက်ကိုတင်မကဘဲ ဆီးအိမ်ကိုပါ ခွဲမိသွားသဖြင့် ကျွန်တော်တို့မှာ နောက်ထပ် သားသမီး ယူလို့ မရတော့သော အခြေအနေကို ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အကျိုးအကြောင်းကို တာဝန်ကျ ဆရာဝန်က ဆောရီးတစ်လုံး ခံပြီး ပြောခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။
တစ်လောက မန်းရွှေမြို့သို့ရောက်သောအခါ မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ ဇနီးသည်ကို ကိုယ်ဝန် အရင့်အမာနှင့် တွေ့လိုက်ရပါသည်။ မိတ်ဆွေကြီးမှာလည်း ၄၀ကျော်၊ သူ့ဇနီးမှာလည်း ၄၀ ကျော်၊ သားကြီး သမီးကြီးတွေပင် လူပျိုပေါက်၊ အပျိုပေါက်ချိန်ရောက်မှ “ကံပေါ်”နေသော မိတ်ဆွေကြီးကို ကျွန်တော်က စလိုက် နောက်လိုက်မိသွားပါသည်။
မိတ်ဆွေကြီးက မျက်နှာပျက်ပျက်ဖြင့် ပြန်ပြောပြသော အဖြစ်အပျက်မှာ ကျွန်တော့်အိမ်သူ့အဖြစ်ထက် ဆိုးနေပါတော့သည်။
သူ့ဇနီးသည်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ခန့်ကတည်းက သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်များ၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာအား လျှောက်လွှာ တင်သွင်းလျက် ခွင့်ပြုချက် ရယူကာ သူ့ဇနီးအား တရားဝင် သားကြောဖြတ်ခဲ့ပါသတဲ့။
ယခုကဲ့သို့ ၄၀ ကျော်မှ ကိုယ်ဝန်ပေါ်လာသောအခါ မျက်ကလဲ ဆန်ပြာနှင့် နောက်ကြောင်းကို ပြန်လိုက်ကြည့်သောအခါ ထိုစဉ်က သားကြောဖြတ်ခြင်းကို တာဝန်ယူခဲ့သော ဆရာဝန်များကို သိလာရပါသည်။ ထိုဆရာဝန်များကို အကျိုးအကြောင်း ပြောပြသောအခါ ဆရာဝန်များက ယခုလို ပြန်ပြောပါသတဲ့။
“ဟာ… ဟုတ်တယ်၊ မှတ်မိပြီ။ အဲတုန်းကရှင်၊ ရှင့်မိန်းမ ဗိုက်ကို ဖွင့်ပြီးခါစမှာ အရေးပေါ် အသက်လုရမယ့် လူနာတစ်ယောက် ရောက်လာတာနဲ့ အဲဒီ့လူနာဘက်ကို ကူးပြီး အားလုံး ဝိုင်းဝန်းခဲ့ကြရတယ်ရှင့်။ အဲလို ဝိုင်းဝန်းနိုင်ဖို့အတွက် ရှင့်မိန်းမဗိုက်ကို သည်တိုင်းပဲ ပြန်ပိတ်ခဲ့ရတာ၊ ကျွန်မ မှတ်မိပြီ၊ မှတ်မိပြီ…၊ ဆောရီးပါပဲရှင်…”တဲ့။
သက်ဆိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်များ မန်းရွှေမြို့တွင် သက်ရှိ ထင်ရှား ရှိနေပါသည်။ မပြောကောင်းသောကြောင့်သာ အမည်နာမ ထုတ်ဖော်မပြောခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။ လိုအပ်လျှင်မူ လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်တော်က လီဆယ် လုပ်ကြံပြီး ရေးပြခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ တကယ့်အဖြစ်အပျက် ခိုင်မာကြောင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုတလော ရေပန်းစားစပြုလာသော မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် လူငယ်လေးတစ်ဦး၏ မိဘနှစ်ပါးစလုံးနှင့် ကျွန်တော်နှင့် ခင်မင် သိကျွမ်းခဲ့သည်မှာ ဆယ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။
ထိုသူငယ်လေး၏ ဖခင် ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေမှာလည်း အလွန်တရာမှ ရောဂါ ထူပြောသူဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ သူနှင့် ကျွန်တော်မှာ မေ့လောက်မှ တစ်ခါ၊ ဟိုနား သည်နား ဆုံဖြစ်ကြသူများဖြစ်သဖြင့် သူ့ကို တွေ့လိုက်တိုင်း လန်းလန်းလန်းလန်းနှင့် ရွှင်ရွှင်ပြပြချည်းဖြစ်သော်လည်း တွေ့တိုင်း သူ ပြောတတ်သော စကားမှာ သူ ဆေးရုံ တက်ခဲ့ရသော အကြောင်းများချည်းသာ ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။
သူနှင့်ရော၊ ကျွန်တော်နှင့်ပါ သိကျွမ်းသူများထံမှ တစ်ဆင့်ကြား စကားဖြင့်လည်း သူဆေးရုံ မကြာခဏ တက်ရတတ်ကြောင်း ကျွန်တော် သတိထားမိနေခဲ့ပါသည်။
တစ်လောက သူနှင့်တွေ့သောအခါ သူ ပြောပြသော အဖြစ်အပျက်မှာလည်း အလွန်တရာ ရင်သပ် အံ့သြဖို့ ကောင်းလှသဖြင့် ပြန်လည်တင်ပြလိုပါသည်။
သူ့ဝမ်းထဲမှ အူ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုက သူ့ကို ကောင်းစွာ ဒုက္ခပေးနေသဖြင့် ဖြတ်ထုတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ကြကာ အငြိမ်းစားယူပြီး ခွဲစိတ် ပါရဂူကြီးတစ်ဦးက ခွဲစိတ် ဖြတ်တောက်ပေးခဲ့သည်မှာ ၃နှစ်ခန့် ကြာပါပြီ။
မကြာသေးမီက သူ့မှာ ဗိုက်နာရောဂါ ပြန်ပေါ်လာသဖြင့် ဆေးခန်း အများအပြား၊ ပါရဂူ အထွေထွေနှင့် စမ်းသပ် စစ်ဆေးမိပြန်ရာ သူ ဖြတ်တောက်ပြီးခဲ့သော အူ အစိတ်အပိုင်းကြောင့်ဟု အားလုံးက တစ်ညီတစ်ညာတည်း ပြောကြပြန်ပါသည်။ သူ့ဝမ်းထဲတွင် ထိုအစိတ်အပိုင်း မရှိတော့ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သည့် ၃ နှစ်ကပင် ခွဲစိတ်ဆရာကြီး ဦးဘယ်သူနှင့် ဖြတ်တောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ထိုအချက် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သူက ခြေကန် ငြင်းပါသေးသည်။
အာလ်ထရာဆောင်း ရိုက်ကြည့်သောအခါတွင်မူ လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်က ခွဲစိတ်ပါရဂူကြီး ကိုယ်တိုင် ဖြတ်တောက်ခဲ့သည်ဟူသော အူအစိတ်အပိုင်းမှာ သူ့ဝမ်းထဲတွင် ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း အသေအချာ သိလိုက်ရပါသည်။
ထို့ကြောင့် နောက်တစ်ခါ ဆေးရုံ ထပ်တက်ပြီး အခြား ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးဖြင့် ဖြတ်ပြီးသားဟု အဆိုရှိသောအပိုင်းကို တကယ် သွားဖြတ်လိုက်ရပါသည်။
ထိုသို့ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကို အမှန်အတိုင်း သိရပြီး ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ရသောအခါ ယနေ့တိုင် သက်ရှိ ထင်ရှားရှိဆဲ မူလ ခွဲစိတ်ပါရဂူကြီးအား အကျိုးအကြောင်း သွားမေးသောအခါ “အေးဗျာ…၊ အဲတုန်းက ဘာကိစ္စမှန်းတော့ မမှတ်မိဘူး၊ အရေးပေါ် ကိစ္စတစ်ခု ပေါ်လာတာနဲ့၊ ကျွန်တော်လည်း မဖြတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး ကိုဟဝှာရေ့၊ ဗိုက်ဖွင့်ပြီး သည်တိုင်း ပြန်ပိတ်ပေးလိုက်ရတာ… ဆောရီး…”ဆိုပဲ။
ဒါလည်း မပြောကောင်းသောကြောင့်သာ အမည်နာမ မထုတ်ဖော်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်လျှင် လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါသည်။ သက်ဆိုင်သူအားလုံး သက်ရှိထင်ရှားနှင့် ခြေခြေမြစ်မြစ် ရှိပါသေးသည်။
ယခု ကျွန်တော် တင်ပြလိုက်သော ဖြစ်ရပ်မှန် သုံးရပ်စလုံးတွင် ဆောရီးနှင့် ပြီးခဲ့ရသည်ချည်း ဖြစ်ပါသည်။ အသက်ပါ ပေးခဲ့ရသော လူနာများအတွက်လည်း ထိုသို့သော ဆောရီးပေါင်း မည်မျှ ရှိနေလောက်သည်ကို အားလုံး တွေးဆဆင်ခြင်ကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသကာဟု အောက်မေ့ပြီး ကံအပေါ် ပုံချလျှင်ဖြင့် ရတန်ကောင်းသည့်တိုင် အသက်ကို ဉာဏ်စောင့်သည်ဟူသော ဆိုရိုးကလည်း ထိုအတွေးကို မှောင့်နေပြန်ပါသည်။
ထိုဉာဏ်ထဲသို့ ဆောရီးလေးတစ်လုံး ရောက်မလာအောင် လုပ်လို့ မရဘူးလားဟု တွေးမိရပြန်လေသောအခါတွင်မူ…
(ဝ၃၊ ဝ၇၊ ဝ၁ နေ့ထုတ် သတင်းစုံဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄ အမှတ် ၄၀)
Author lettwebawPosted on 11 September 2010 18 October 2010 Categories Recounts, Reproduction
48 thoughts on “Is “sorry” really enough?”
11 September 2010 at 11:17 pm
သူများနိုင်ငံတွေမှာလို တရားပြန်စွဲတဲ့ အလေ့အထ ရှိကြရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ …. လုပ်တဲ့သူကလည်း ပေါ့ပေါ့ဆဆ မလုပ်ကြတော့ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ “ဆရာဝန်” ဆိုတဲ့ လူတန်းစားတစ်ရပ်က လူနာတွေကို သူတို့ “ထမင်းရှင်” လို့ မအောက်မေ့ပဲ “သူတို့” ကသာ လူနာတွေရဲ့ “အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်” အဖြစ် တဖက်သတ် “ကျေးဇူးကြီး” နေကြရလို့ လေးလေးစားစားကို မရှိဘူး။
12 September 2010 at 12:07 am
12 September 2010 at 2:58 am
လူတိုင်း လူတိုင်း တာဝန်ယူတတ်တဲ့ တာဝန်သိစိတ်လေး တခု ထားကြဖို့ကိုတောင် တိုက်တွန်းရမလို ဖြစ်နေပြီ။ ဆောရီး ပြောပေမဲ့ ပိုက်ဆံတော့ ယူလိုက်တယ် မဟုတ်လား။
12 September 2010 at 3:33 am
I feel most specialist physicians in Burma are working just for money. They check you less than5min to diagnose. They haveaway to get more money from you by unnecessary ultrasound, blood tests, lab works nowaday.
24 September 2010 at 8:10 pm
I just want you to try to think in the doctors’ way. Here in Myanmar, yes you are right, most of the specialist physician give very short time to each patient. Yet there are still so many patients waiting to be seen by them everyday. Have you ever think of why is this happening?
This is because shortage of specialists in Myanmar. The specialists have to work in government hospitals in office hours, so they have very little time to see all the patients waiting to be seen. So they have to be quick. If not, who’s gonna see all these patients?
Another thing that you said (probably because of not knowing about medicine) is the word “unnecessary”. If you ever have some disease orarelative with some disease, you can check online about the routine (routine means the guidelines set by standard health organizations) tests that have to be done about that disease. You will probably find out that the tests are much more than the doctors here asked you to do.
12 September 2010 at 4:36 am
ဆရာရယ်..ဒီစာကိုဖတ်ရတာ ဆရာဝန်ဆိုတဲ့ လူတန်းစားတွေကိုတောင် တော်တော် စိတ်ပျက်လာတယ်။
စေတနာမပါရင်လဲ အသက်တချောင်းကို ကယ်မနေကြပါနဲ့လို့ ဆရာဝန်တွေကို ပြောချင်တယ်ဗျာ.
12 September 2010 at 9:06 am
ဆရာဝန်တွေရဲ့ ဆောရီတစ်လုံးအကြောင်းကတော့ ပြောမဆုံးနိုင်ပါဘူးရှင် …
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်က ကျွန်မအမေရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ကားအက်ဆီးဒင့်ဖြစ်လို့ လက်မောင်းရိုးတစ်ချောင်း သွင်သွင်ကျိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျိုးသွားတဲ့အရိုးကို စတီးရိုးနဲ့ ပြန်အဆက်မှာ မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံက အရိုးအထူးကုဆိုတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကောင်းမှုနဲ့ ကျိုးတဲ့အရိုးပြန်ဆက်လို့ ကောင်းတဲ့အကြောပြတ်ကာ ယနေ့အထိ လက်တစ်ဘက် မစွမ်းမသန်ဘ၀ကို ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာဝန်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ဆောရီးပေါ့နော်။ (ခွဲစိတ်အဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ အခြား ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ ဆောရီးဖြစ်ပါသည်။ ကာယကံရှင်ဆရာဝန်ကတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေသည်မှာ ယနေ့အထိပါ။) အားကိုးစရာ ယောက်ျားသားမရှိရှာတဲ့ မုဆိုးမ သားတစ်ယောက်အမေဘ၀မှာ သန်စွမ်းနေသေးတဲ့ လက်တစ်ဖက်ကို အားကိုးလို့ လိုင်းကားတိုးစီးရင်း ၀န်ထမ်းဘ၀နဲ့ အနာဂတ်ကို ရုန်းကန်ရင်ဆိုင်နေရဆဲပါ ….
12 September 2010 at 12:16 pm
13 September 2010 at 11:38 am
ဆရာဝန်…. ဆရာဝန်…… ဆရာဝန်???????????
13 September 2010 at 11:42 am
ဆရာကို မသိလို့မေးချင်တယ် …။
တစ်ခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ဆိုရင် အဲလိုဖြစ်ရင် တရားပြန်စွဲလို့ရတယ်လို့ ကြားဖူး ဖတ်ဖူးမြင်ဖူးလို့ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ့ဆရာဝန်ဆိုတဲ့သူတွေ အလုပ်ကိုလေးလေးးစားစားလုပ်အောင်လို့ တရားပြန်စွဲလို့မရတောင် သူတို့တွေရဲ့ အဲလိုလုပ်ရပ်တွေကို နာမည်နဲ့တကွကို ဂျာနယ်တွေ စာစောင်တွေပေါ်မှာတင်ပြီး အားလုံးကို အသိပေးသင့်တယ်လို့တော့ ထင်တာပဲ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာက အဲလိုဖြစ်ခဲ့တာတွေ၊ ဖြစ်နေတာတွေက တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ တစ်ချို့ ဆိုိ ငွေပါအကုန်ခံပြီးကိုယ်အသက်ပါရင်းလိုက်ရတာတွေပါ။
13 September 2010 at 11:51 am
မရဘူးဗျလို့ပဲ ဖြေရတော့မှာပါ။ နာမည်နဲ့တကွလည်း ဂျာနယ်တွေ စာစောင်တွေမှာလည်း တင်လို့ မရဘူးခင်ဗျ။
13 September 2010 at 6:03 pm
ဆရာ အတ္တကျော် ဆရာဝန်ဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့ ရင်းနှီးပါသလဲ။သိချင်တာပါ
13 September 2010 at 5:59 pm
ဆရာဝန် လူတန်းစားကို အဲလိုမြင်နေတာလား။၀မ်းနည်းစရာပဲ။
13 September 2010 at 5:57 pm
အဲဒီလို တဘက်သက်ကြီးလည်း မပြောကြနဲ့လေ၊ ဘယ်လောကမှာ မဆို စိတ်ထားကောင်းတဲ့လူနဲ့ မကောင်းတဲ့သူဆိုပြီးရှိကြတာပဲလေ ။ဆရာဝန်တွေ မကောင်းဘူး လို့တော့ ပြောလို့မရပါဘူး။နောက်ပြီး specialist တွေ အားလုံးလည်းဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာဝန် တွေ ဆိုတာ အသက်နဲ့ရင်း ပြီး အလုပ်လုပ်နေတာပါ။
ဆရာ အတ္တကျော် ကို ကျွန်မ လေးစားပါတယ်။ကျွန်မ ပြောချင်တာက အားလုံးမဟုတ်ပါဘူး။
13 September 2010 at 6:43 pm
မှန်ပါတယ် ဆရာမ ဒေါ်မိုးခင်ဗျား။ အားလုံး သည်လို မဟုတ်တာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သည်လို ဟုတ်နေသူ (လူနည်းစုပဲ ဖြစ်စေဦးတော့… တကယ်တော့ လူနည်းစု မကတော့ပါခင်ဗျား။) တွေရဲ့ လက်ချက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဇနီးမောင်နှံလို အီစိမ့်နေအောင် ခံလိုက်ရသူတွေ၊ ကျွန်တော့်စာထဲက အသက်ကြီးမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရသူလို ခံစားရသူတွေ၊ နှစ်ခါပြန်ခွဲရသူတွေ အပြင် အသက်ပါ ပေးလိုက်ကြရသူများလည်း ရှိနေတာလည်း အမှန်ပါခင်ဗျာ။ ဒါလေးလောက်တော့ လက်ခံပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော် ဆရာဝန် ဘယ်နှယောက်နဲ့ ရင်းနှီးသလဲဆိုရင်တော့ ရေလို့ မရတဲ့ အရေအတွက်နဲ့ ရင်းနှီးပါတယ် ခင်ဗျား။ ပါရဂူတွေထဲမှာလည်း ကျွန်တော် ချစ်ခင်လေးစားသူတွေ၊ ရင်းနှီးသူတွေ ရှိပါတယ်။ နာမည်နဲ့ ထုတ်ပြောဖို့ မသင့်လို့သာ မပြောတာပါ။
ကျွန်တော် နားလည်တာလေး တစ်ခု ပြောကြည့်ပါရစေ။ စာရေးဆရာတွေ အားလုံး အရက်သမားချည်းပဲလို့ ပြောလာမယ်ဆိုရင်တောင်မှ ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှ ပြန်ပြောဖြစ်မယ် မထင်ဘူးခင်ဗျ။ ကျွန်တော် အရက်သမား မဟုတ်တာ ကျွန်တော် အသိဆုံးပဲလေ။ ကျွန်တော့်လိပ်ပြာလည်း သန့်နေပါတယ်။ အဲတော့ ကျွန်တော့်ဘက်က ဘာမှ ခုခံချေပနေမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောတဲ့သူက ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းကြုံးရမ်းတယ်ဆိုရင် ပြောသူရဲ့ တာဝန်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်စင်ရာ ကျည်ပွေ့လိုက်ဖို့ မလိုအပ်ဘူး ထင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲလို ပြောလာသူကို ခင်ဗျား စာရေးဆရာ ဘယ်နှယောက်နဲ့ သိလဲလို့ မေးစရာလဲ လိုမယ် မထင်ပါဘူးခင်ဗျား။ ကျွန်တော့် တွေးပေါက် မှားနေရင် သည်းခံ ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျား။
13 September 2010 at 7:51 pm
ကျွန်တော်က ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဆိုပေမဲ့ ဆရာဝန်တွေဘက်မှာပဲ တရားသေရပ်တည်ပြီးပြောခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး…
သူတို့တွေ မကောင်းရင် မကောင်းသလို ကျွန်တော် post တွေလည်းရေး..comment တွေလည်းပေးဖူးပါတယ်…
ဆရာဝန်တွေကို စော်ကားချင်စိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင် မကွေးမှာ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က specialist ဆရာဝန်တွေ ဘယ်လို အနစ်နာခံနေကြတယ်… မြို့ခံတွေအတွက် ဘယ်လောက်အားထားနေရတယ်ဆိုတာကို တစ်ခါလောက်ပဲလေ့လာကြည့်ရင် ဆရာအတ္တကျော်လို ထက်မြက်တဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်သွားမိပါလိမ့်မယ်..တကယ်ပြောတာပါ..
13 September 2010 at 8:05 pm
ကျွန်တော် မြန်မာစာ ကောင်းကောင်း မရေးတတ်ဘူးဆိုတာ ထောက်ပြလိုက်တဲ့အတွက် ဆရာစည်သူနိုင့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်စာက “ဆရာဝန်တွေ”ကို “စော်ကား”တဲ့ စာလို့ ဆရာက သတ်မှတ်လိုက်တာကိုး။ အေးဗျာ… ကျွန်တော် ညံ့တာပါ။
ဖြစ်ရပ်မှန် သုံးခုကို ဖော်ပြလိုက်တာနဲ့ “ဆရာဝန်ထုတစ်ရပ်လုံး”ကို သိမ်းကြုံး စော်ကားလိုက်တယ်လို့ ဆရာက သတ်မှတ်လိုက်ပုံ ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဆရာရယ်… ကောင်းတဲ့ ဆရာဝန်တွေ၊ အနစ်နာခံနေတဲ့ ဆရာဝန်တွေကို ထောက်ထားသောအားဖြင့် မှားယွင်းလွဲချော်မှုတွေ အားလုံးကို ကျွန်တော်တို့က ရေငုံ နှုတ်ပိတ်နေရမှာပါလားခင်ဗျာ။
ကျွန်တော့် ဇနီးတစ်ယောက်လုံးလည်း ခံထားရတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျန်တဲ့သူတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ သွားတွေ့မေးချင်တယ်ဆိုလည်း ကျွန်တော့်ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် သုံးခုကို ဆရာ့ဘက်က နားလည်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ဆရာ့လို ထက်မြက်သူတစ်ယောက်လည်း သည်ကွန်မန့်ကို ရေးမိတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြစ်တင်မိသွားပါလိမ့်မယ် ဆရာရေ။ တကယ် ပြောတာပါခင်ဗျာ…
13 September 2010 at 9:36 pm
ဆရာကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။ ဆရာ့စာတွေထဲကလို ထမင်းမနပ်တာကို ပြောလိုက်တာ… ထမင်းချက်တဲ့ မီးဖိုချောင်ကလူတွေက သူတို့ကို စော်ကားတယ်လို့ မြင်ကုန်ကြပြီ။ ဖြည်းဖြည်း ပြောပါ ဆရာရယ်.. ကျွန်တော်လည်း နောက်က လိုက်ချင်လို့ပါ… ဟိုနေ့က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ဖုန်းပြောဖြစ်တော့ သူတို့ မအားတဲ့အကြောင်း အလုပ်များနေတဲ့ အကြောင်း ပြောတယ်… သူတို့နဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်လို မိသားစုလို နေတဲ့တစ်ယောက် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားလို့တဲ့။ သူတို့နဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ရက်ကပဲ အလုပ်အတူ လုပ်နေသေးတာတဲ့… အဲဒီလူက သူတို့ဆီက အပြန် မောမော နေလို့ ညနေဖက်ကို ဆေးခန်းကြီး တစ်ခုမှာ ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ သွားပြီး စစ်ဆေးလိုက်သေးတယ်တဲ့… ပြန်လာပြီး နောက်တစ်ရက် နေတော့ ဆုံးသွားလို့ ဆိုပြီး ဖုန်းဝင်လာတယ်တဲ့… ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ နှလုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်သွားတာလို့ ပြောတယ်။ ဆရာဝန်က ဆေးပေးလိုက်တယ်… ရောဂါ အခြေအနေကို သေချာ မပြောသလို ပေးလိုက်တဲ့ ဆေးသောက်ပြီး ဘယ်လို နေရမယ်ဆိုတာပါ မညွှန်ကြားလိုက်ဘူးတဲ့… ဒါက သူ ကျွန်တော့်ကို အကြမ်းဖြင်းပြောပြတာပါ။ ဆေးသွားစစ်ရဲ့သားနဲ့ ဘာလို သည်လို လျင်လျင်မြန်မြန်ကြီး ဖြစ်သွားရတာတုန်းလို့တောင် ကျွန်တော်က မေးသေးတယ်… ပေးလိုက်တဲ့ဆေးက သောက်ပြီး နာရီနဲ့ချီ ငြိမ်နေရမယ်ဆိုလား ဘာလား မသိဘူးဆရာရယ်… ကျွန်တော်လည်း စိတ်ပျက်တာနဲ့ သိပ်လုံးစေ့ပတ်စေ့ မမေးလိုက်မိတော့ဘူး။ ခက်တာက ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ အထက်က ဆရာဝန်လေး ပြောသလို လူနာတွေအတွက် တကယ် အနစ်နာခံနေတယ်ဆိုတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေ အချိန်ပေးတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေ လိုနေပြီ ထင်ပါရဲ့… ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာလည်း ရှိမှာပါ ဆရာရယ်… ဒါပေမယ့် လူနာတွေနဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အရမ်းကို မရှိသလောက် ရှားနေသလိုပါပဲ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဘယ်ဆေးခန်းကြီးတွေရဲ့ ထိုင်တဲ့ ဆရာဝန်စာရင်းကို ကြည့်လိုက် ကြည့်လိုက် အနည်းနဲ့အများ ဒီဆရာဝန် ဒီဆရာဝန်တွေချည်းပဲဆိုတော့ စေတနာ ဆရာဝန်ကြီးများ ရှိရင် လက်ညှိုးထောင်ပါလို့ ပြောရမလိုပါပဲ ဆရာရယ်။ နယ်က ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးများ စုပြီး ရန်ကုန်မှာ စေတနာဆရာဝန်ကြီးများ ဆေးခန်းဆိုပြီး လာထိုင်ပေးရင် တစ်ယောက်လက် တစ်ယောက်တို့ ပြောပြီး ပြေးသွားလိုက်ကြမယ့်ဖြစ်ချင်း။ အခုတော့ လူလေးငါးယောက်ဆုံလို့ စကားလမ်းကြောင်း အဲဒီ မရောက်သွားနဲ့ လေးယောက်မှာ ကိုယ်တွေ့ရော ပတ်ဝန်းကျင်တွေ့ပါ ပြောမကုန်ပေါင်တွေ ဖြစ်ကုန်ကြပါရောလား။ ဟိုတစ်လောက အလင်းတန်း ဂျာနယ်ထဲမှာပါတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဆိုလည်း အဲဒါဖတ်ပြီး တော်တော် စိတ်ကုန်သွားတယ်။ ဆရာကော ဖတ်မိလိုက်သေးလား။ ဆက်ပြောရရင်တော့ နယ်ကနေရော မြို့ပေါ်ကရော စေတနာ ဆရာဝန်ကြီးတွေ နာမည်ကြီးသွားပြီဆိုရင်ရော… ဆေးခန်းကြီးများရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု အပေးအယူ လုပ်မှုတွေကို ဘယ်လောက် တောင့်ခံနိုင်မလဲတော့ မသိဘူး၊ လူတွေမှာလည်း စိတ်ခံစားချက်တွေ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဆိုတော့ လောကကြီးတစ်ခုလုံး မကျေနပ်သလို ဖြစ်နေမိကြတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အခုနေအခါမှာ ကျွန်တော်ပြောသလို လူနာအပေါ် စေတနာထား အချိန်ပေးပြီး ကုပေးတဲ့ ဆေးခန်းတစ်ခုတလေလောက် ပေါ်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းတယ်။ နာရီပေါင်းများစွာ ကိုယ်အလှည့် ရောက်အောင် စောင့်နေပြီး ဆယ်မိနစ် ဆယ့်ငါးမိနစ်တောင် မရှိတဲ့ အချိန်လေးမှာ တွေ့ရတဲ့ ဆရာဝန်များ။ အဲလိုမျိုးတွေ တဖြည်းဖြည်း ကင်းဝေး ပပျောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းနေရုံမှတစ်ပါး အခြားမရှိပါလို့… ဆရာနဲ့ မတွေ့ဖြစ်တာ ကြာလို့ ၀င်လျှာရှည်သွားပြီဆရာရေ…
ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာအမြဲကြားနေရတာပါ။ ကိုယ်တိုင်ကတော့အကြီးစားခွဲစိတ်မှူမလုပ်ဖူးသေးတဲ့အတွက် မကြုံရသေးဘူး။ ဗိုက်ထဲမှာပတ်တီးကျန်ခဲ့တာတို့ဓားကျန်ခဲ့တာတို့ ကိုရောကြားချင်သေးလား ကိုကို မမ ဆရာဝန်တို့ ရေ။ မြန်မာပြည်မှာ တကယ်တတ်တဲ့ ဆရာဝန်ကျတော့မောက်မာတယ်။ စေတနာထားတဲ့ဆရာဝန်ကျတော့ ဟုတ်တိပတ်တိမတတ်။ ဒီလိုပဲနှစ်ပါးသွားနေခဲ့တာကြာပေါ့။
14 September 2010 at 10:11 am
“မမှားသော ရှေ့နေ… မသေသော ဆေးသမား မရှိဘူး” ဆိုတာကိုတော့ ကြားဘူတယ်….။ ဒီပိုစ်မှာတော့ မမှားသော မသေသော ဆေးသမား မရှိဘူးပေါ့…။ လူဆိုတာ အမှား အယွင်းကင်းတယ်ရယ်လို့တော့ မရှိကြပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် မှားခဲ့တဲ့ အမှားကို သင်ခန်းစာ ယူတတ်မယ် ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက် အလွန်ပေါ့..။ ပိုစ်ထဲမှာ ပါတဲ့ ဆရာဝန်တွေလည်း နောက် ဆက်ခါ ဆက်ခါ ထပ်မှားနေမယ် ဆိုရင်တော့ မကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတွေပေါ့..။
“ဆောရီးလေးတစ်လုံး ရောက်မလာအောင် လုပ်လို့ မရဘူးလားဟု တွေးမိရပြန်လေသောအခါတွင်မူ…” ဆရာတော့ ဘာတွေ တွေးမိလည်း မသိဘူး…. ကျွန်တော် သိသလောက်ကတော့…မြန်မာပြည်မှာ Medical Profession ကလူတွေက တော်တော် အလုပ်လုပ်ချိန်များကြတယ် ထင်တယ်…။ တချို့ နာမည်ကြီး ဆရာဝန်ကြီးတွေဆို နေ့မအား ညမနားပဲ…။ Private ဆေးခန်းမှာ ဆရာဝန်ကြီး လူနာလာကြည့်ချိန်က ည 12 ကျော် 1 နာရီလောက် ဖြစ်နေတတ်တယ်..။ ကျွန်တော် သိမိတာက လူတစ်ယောက်က အလုပ်တွေများတဲ့ အခါ၊ Over ဖြစ်တဲ့အခါ.. Stress တွေ များတဲ့အခါမှာ ဆို မှားတတ်ကြတယ်လို့ သိမိတယ်…. အဲဒါ့ကြောင့်များလား……
14 September 2010 at 4:22 pm
လွန်ခဲ့တဲ့ ကိုးနှစ်က ရေးခဲ့တဲ့စာလေးက ယနေ့အချိန်အထိ သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ သည်မှာ ရေးတဲ့ comment သိပ်မများပေမယ့် Facebook ပေါ်မှာတော့ အတော့်ကို များပြားတယ်။ မှတ်တမ်း မှတ်ရာလေးနဲ့ ကျန်ရစ်အောင် Facebook ပေါ်က ဟာတွေကို ပြန်ကူးပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Dathana Nyeinchanyar, Thura Maung Aye, Khing Soe Aung ကိုရင်သာဂိလေး and5others like this.
နှင်း ဦး ပွင့် – ဆိုးလိုက်တာဆရာရယ်… ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး.. တရားတော့ လွန်ပါတယ်…
Saturday at 23:04 · LikeUnlike ·
Atta Kyaw: အဲဒါ လွန်ခဲ့တဲ့ ကိုးနှစ်ကျော်က ရေးခဲ့တာနော်… အခုအခြေအနေနဲ့ တွက်ဆကြည့်ရင်… အင်း…
Saturday at 23:11 · LikeUnlike ·
Aung Soe: အယ်ဟယ်ဟယ် …လောကမှာဒါမျိုးတွေ တကယ်ရှိလားလို့ တရုတ်ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက ဘုရင်လို မေးရမလိုဖြစ်နေပြီ …ဆိုးလိုက်တာဗျာ …
Saturday at 23:12 · LikeUnlike ·
နှင်း ဦး ပွင့် – သူတို့ ကသေချာတော့ ဘာမှ စေတနာ မထားပေးဘူး… ယူလိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံကျတော့လဲ… ပြီးတော့လဲ များသောအားဖြင့်က မောက်မာသေး… ဘာတွေမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး… လူတိုင်း မဟုတ်ကြပေမယ့် လူများစု ဖြစ်နေကြပြီ..
Saturday at 23:13 · LikeUnlike ·2peopleLoading… ·
Aung Soe: မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေရင် အမှန်တွေ သိပ်မပြောပါနဲ့လား …
Saturday at 23:14 · LikeUnlike · 1 personLoading… ·
Atta Kyaw: “မှန်တာ ပြောလို့ အမုန်းခံရရင် အဲဒါ သာဓုအဖို့ အရသာပဲ” (စာရေးဆရာ သာဓုရဲ့ “သာဓု လူဝါးဝတယ်”စာအုပ် ကျောဖုံးမှ…)
Saturday at 23:38 · LikeUnlike ·6peopleLoading… ·
Aye Win: “အမှန်ကို ဆိုတဲ့ ငါ့ပါးစပ်ကို ချုပ်စဉ်အခါမှာ.. အမှန်ကို မြင်တဲ့ ငါ့မျက်လုံးကို ဖောက်ပါတော့ကွာ.. လူအမည်ခံတဲ့ စာခြောက်ရုပ်ငယ်ဘ၀မို့ သူငယ်ချင်းရေ… ကိုယ်သာရှင်နေ.. ငါ့နှလုံးသားဟာသေ…”။ ထီးဆိုင်ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး သတိရတယ်။
Sunday at 00:58 · LikeUnlike · 1 personLoading… ·
Aye Win: ဆရာကျော်.. သာဓုက သူ့ကို “ပူတူတူးလေး သခင်ဖေသန်း..” လို့ မောင်စွမ်းရည်က ခေါင်းစဉ် တပ်လိုက်တာ ဆတ်ဆတ်ခါ နာသွားပြီး၊ ကက်လန် ရန်တွေ့တယ်ဗျ။ သူ အရသာ တွေ့သွားပုံရတယ်။ သူ ပေါင်ဒါလုပ်ရောင်းစဉ်အခါက ပူတူးတူးလေး ပေါင်ဒါ ဆိုလား….
Sunday at 01:01 · LikeUnlike ·
Atta Kyaw: ဆရာ ဦးအေးဝင်းက အမွှေပဲ။ 😀 ပူတူးတူးလေး ပေါင်ဒါကတော့ မှန်တယ်။ ဆတ်ဆတ်ခါတယ် ဆိုတာလည်း ကြားဖူးတယ်။ သူ့သားတွေ တွေ့မှ မေးကြည့်ရဦးမယ်။ အကြောင်းခံတော့ ရှိမယ် ထင်သဗျို့…
Sunday at 01:17 · LikeUnlike ·
Aye Win: အကြောင်းရှိလို့ တုန်တက်သွားတာပေါ့ ဆရာရယ်။ အညာမန်းက ဆရာစွမ်း အကြောင်းလည်း ဆရာ အသိသားနဲ့။ ပူတူတူးလေး အကြောင်းတော့ ဥာဏ်ပေါ် ကို မေးကြည့် ကြည့်။ ဆရာစွမ်းလေ…. မောင်ဇော်ကို ရေးတာ..မဖြူ ဘယ်ပေတံနဲ့ တိုင်းမလဲတဲ့..။ ကောင်းလိုက်တာ။ အနှစ်ပဲ….။
မန္တလေးမြို့ မနက်ခင်းထဲမှာတော့… ကဗျာဆရာ လမ်းမပေါ် ထွက်လာ နောက်က ခွေးတစီစီနဲ့ ဆိုလား…။ စာသား အတိအကျ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ပြန်ရှာရမယ်။
Sunday at 01:49 · LikeUnlike ·
Atta Kyaw: ကျွန်တော့် ပြင်ပစာနယ်ဇင်း ပထမဆုံး ပုံနှိပ်စာမူက ဆရာ ဦးလှအောင် ကိုင်ခဲ့တဲ့ သောင်းပြောင်းထွေလာထဲမှာ။ “စိန်မောင်စွမ်းရည် ဖတ်ဖို့”ဆိုတဲ့ စာမူဗျ။ သူက ကိုလိုနီ ပုလိပ် ဆားပုလင်း နှင်းမောင် ဂမ္ဘီရ ဖျော်ဖြေရေး ၀တ္ထုကို ပေတံအနီကြီးနဲ့ မဆီမဆိုင် မထော်မ…နန်း စွတ်တိုင်းထားတာ အူယားလို့ ရေးထည့်လိုက်တာ။ ဘ၀ရဲ့ ပထမဆုံး စာမူခ ကျပ် ၃၀ ရတယ်။ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်။ ကျွန်တော် အဲဒါရေးလိုက်တဲ့ လက်ကို ဆရာစိန်ခင်မောင်ရီက မျက်စိကျသွားပြီး စာပေနယ်ထဲ ဂုတ်ဆွဲခေါ်ခဲ့လို့ ကျွန်တော် သည်နေ့ သည်အခြေ ရောက်လာတာပဲ ဆရာဦးအေးဝင်းရေ။ အဲ… အဲဒီ့ ဆရာမောင်စွန်းရေက မန်းသား မဟုတ်ဘူးနော်။ ရွာနီးချုပ်စပ်က… 😀
Sunday at 02:09 · LikeUnlike · 1 personLoading… ·
Aye Win: ဟုတ်၊ ဟုတ် ကာရန် လိုက် လိုက်တာ အညာမန်းက ဆရာစွမ်းဖြစ်သွားတာ။ စိန်ခင်မောင်ရီကော မင်းသိင်္ခကော RF တွေ မဟုတ်လား။ ဘာတွေ ရေးလိုက်တာလဲ။ ကျနော် မဖတ်လိုက်ရဘူးလား၊ မမှတ်မိတော့တာလား မသိဘူး။ အချိန်ရရင် တင်ပေးပါ ဆရာရေ။ ဆရာရတဲ့ စာမူခ ၃၀ ဆိုတာလည်း ဟိုတုန်းက… ငွေလေ။ လက်ရည်တခွက် တကျပ် မဖြစ်သေးဘူး ထင်တယ်။
Sunday at 02:16 · LikeUnlike ·
Atta Kyaw: ကျွန်တော်က ငတုံး… RF တွေ ဘာတွေ သိပ်သိတာ မဟုတ်ဘူး။ စာရေးဆရာတွေ အနေနဲ့ပဲ သိထားတာ။ မောင်မြင့်မြတ်တောင် ပါသေးတယ်။ နောက်အတော်ကြီးကြာမှ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်သူလဲ မမှတ်မိတော့သူ တစ်ယောက်က ခင်ဗျား RF တွေနဲ့ ပေါင်းနေတယ်နော်လို့ လာပြောတော့မှ သိတာဗျ။ အဲလောက် အူတာ။ စာမူကတော့ အတော် ပြန်ရှာမှ ရမယ်ထင်တယ် ဆရာရေ။ အိမ်တွေ ခဏခဏ ပြောင်းခဲ့ရတာမို့ ဘယ်နား ထားမိမှန်းကို မသိတော့ဘူး။ တွေ့ရင်တော့ တင်လိုက်ပါ့မယ်ဗျာ။ ရှေးဖြစ်ဟောင်း အောက်မေ့ဖွယ်ပေါ့။ နှစ် ၃၀ တင်းတင်းတောင် ရှိမှကိုး။
Sunday at 02:29 · LikeUnlike ·
Aye Win: ကျနော့် ဘော်ဒါတွေထဲလည်း RF တွေရှိပါတယ်း ကောင်းကြပါတယ်။ ကိုအောင်ပြည့်။ အညာတမာ၊ … ။ ကိုစိန်လှအောင်ဆိုတာ ကျနော့ ဘော်ဒါပေါ့ဗျာ။ ခုတော့ ဆုံးသွားပါပြီ။ တွံတေးတောကြီးတန်း အထူးခရိုင်မှာ စိုးကြီးရဲ့ တပ်နီလူငယ်ပေါ့။ ကွမ်းခြံကုန်းက။
Sunday at 03:26 · LikeUnlike ·
Kyaw Thu Yein Lwin: ဆရာတို့ ခင်ဗျာ.. RF ဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
Sunday at 14:34 · LikeUnlike ·
Atta Kyaw: RF ဆိုတာ Red Flag အလံနီကို ပြောတာ။ သခင်စိုးရဲ့ အလံနီ ကွန်မြူနစ်ပါတီကို ထောက်ခံအားပေးသူတွေပေါ့။ သူတို့နဲ့ ပြိုင်ဖက်က BCP (ဗကပ)။ မြန်မာ စာပေနယ်မှာ အဲဒီ့ခေတ်က အဲဒီ့ ကွန်မြူနစ်တွေက ကြီးစိုးထားကြတယ်။ “စာပေသည် ပြည်သူ့အတွက်”ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေ သောသောညံပြီး ကွန်မြူနစ်မှ မဟုတ်ရင် စာပဲ မရေးရမယ့် အပေါက်မျိုး အတော်ချိုးကြတယ်။ ကျွန်တော် စာပေနယ် ရောက်စမှာ အထက်မှာ ရေးခဲ့တဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်က ခပ်တုံးတုံးရယ်၊ ဘာမှန်း ညာမှန်း မသိဘူး။ စာပေသည် ပြည်သူ့အတွက် ဆိုတာကိုလည်း ဘယ်တုန်းကမှ အယုံအကြည် မရှိဘူး။ စာရေးချင်တဲ့သူဟာ လက်ယားလို့ စာရေးတာပဲဗျာ။ အူယားလို့ ရေးတာပဲဗျာ။ ဒါပဲ သိတယ်။ ဘာမှ ပြည်သူ့အတွက်တွေ ဘာတွေ နားမလည်ဘူး။ ရေးချင်လို့ ရေးတာပဲ။ ကြိုက်တဲ့သူက ဖတ်မှာပဲ။ မကြိုက်တဲ့သူက မဖတ်ဘူး။ ရိုးရိုးလေးပဲ တွေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက စာပေကို အရောင်ဆိုးဖို့ တအားကြိုးစားတယ်။ သူတို့လို နီမှ လူထင်တယ်။ မနီရင် တောင်ပြောမြောက်ပြော ပြောတယ်။ နီတာချင်း တူရင်တောင် သူတို့နဲ့ မတူတဲ့ အနီတွေကို ဖဲ့တယ်။ အဲဒီ့ ရောဂါကြီးက စာပေနယ်မှာ အတော်လှိုက်စားခဲ့တယ်။ ရယ်ရတာက အဲဒီ့ဆြာဂျီးတွေက အခု ဒီမိုကရေစီက နှစ်ပြားမှ မလျှော့တဲ့သူတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ အခု တစ်မိုးလုံး ဖျောက်ဆိပ်လုပ်နေတဲ့ ဘိုးတော်ကြီးတစ်ပါးဆိုလည်း တစ်ချိန်က Carl Marx ရဲ့ အရင်းကျမ်းကိုမှ ထိုင်ရှိခိုးခဲ့တဲ့သူ။ အခုကျတော့ သူက Adam Smith ရဲ့ The Wealth of Nations စာအုပ်ကိုမှ ကိုးကွယ်ပါသတဲ့။ မသိတဲ့ သူတွေကတော့ အဲဒီ့ ကြောင်သူတော်ကြီးကို အဟုတ် မှတ်နေကြတယ်။ ပြောရတာ မကောင်းဘူးဗျ။ သေတဲ့သူတွေက သေကုန်ကြပြီ။ တိုက်ကြီးနဲ့ တခမ်းတနားနေ၊ စီးပွားရေး ကောင်းလို့ မြို့မျက်နှာဖုံးလည်း လုပ်နိုင်တဲ့ လူချမ်းသာ စာရေးသူတွေလည်း ပစ္စည်းမဲ့ ၀ါဒသာ ကိုးကွယ်ရာ၊ စာပေသည် ပြည်သူ့အတွက် အော်ရင်း သေသွားကြတာဗျို့။ အခုအချိန်အထိ အဲဒီ့ ကွန်မြူနစ် နို့နံ့ မစင်သူတွေက နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ဒီမိုကရေစီ စကားလုံး တွင်တွင်သုံးပြီး ကော့ကော်ကန်ကား လုပ်ပြချင်ကြတုံး။
Sunday at 17:03 · LikeUnlike · 1 personLoading… ·
Kyaw Thu Yein Lwin: အခုလို ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ.. နိုင်ငံရေးကတော့ စာပေကို အနည်းနဲ့ အများဂယက်တော့ ရိုက်နိုင်တယ် ထင်ပါတယ်ဆရာ.. အဲဒီလိုကြီးတွေ ဖြစ်ခဲ့မှန်းတော့ ကျွန်တော်မသိဘူး..ဆရာ.. ကျွန်တော်က အဲဒီခေတ် စာတွေ အားလုံးကို ကွန်မြူနစ်အရောင် လွှမ်းတယ်လို့ပဲ ထင်ထားတာ..ပြီးတော့ ကျွန်တော်မရှင်းတာလေး တစ်ခုလောက်ထပ်မေးပါရစေ..ဆရာ.. ဒါဆို ဆရာကြီး မြသန်းတင့် တို့ .. ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ တို့ ရော RF တွေပဲလားဆရာ..
Sunday at 17:19 · LikeUnlike ·
Arkar Sai Yin: လူတစ်ယောက်ကို အကောင်းဘက်က ကြည်.ပြီး ချီးမွမ်းပေးတာကကောင်းသလား ဒါမှမဟုတ် အဆိုးဘက်ကကြည်.ပြီး ဝေဖန်ပေးတာက ကောင်းသလား ဘယ်တစ်ခုကများ ကာယကံရှင်ကို တိုးတက်စေနိုင်မလဲ မသိဘူးနော်။
Sunday at 17:56 · LikeUnlike · 1 person Esther Win likes this. ·
Kyaw Thu Yein Lwin: ဆရာရေ.. ကျွန်တော်မေးတာ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါ ဆရာ.. သိချင်တာနဲ့ပဲ မေးလိုက်တာပါ.. ဘာပဲပြောပြော ဒီနေ့ အဖို့ တော့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အသိဥာဏ်တစ်ခု တော့ တိုးပါတယ် ဆရာ.. ဆရာ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြလို့လည်း ကျွန်တော် မေးလိုက်တာပါဆရာ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ..
Sunday at 20:54 · LikeUnlike ·
Atta Kyaw: KTYL: အသေအချာတော့ မသိဘူးဗျ။ ဆရာမြတို့ ဆရာတာရာတို့ ဘာလဲ ဆိုတာကို ပြောပါတယ်။ နီတာတော့ နီခဲ့ကြတာပဲဗျ။ အဲဒီ့ခေတ်က နီတဲ့ ဖက်ရှင်ရှိခဲ့တာကိုး။ အမှားမပါပါဘူးဗျာ။
ASY: ဘယ်ဘက်ကပဲ ဖြစ်ဖြစ် အပြုသဘောနဲ့ ပြောတာ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ အဆိုးဘက်ကဆိုလည်း အဆိုး.ကို ထောက်ပြတာထက် ပိုကောင်းအောင် ဘယ်လို လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောတာမျိုးပေါ့။ ကျွန်တော်အပါအ၀င် တော်တော်များများ အတွက်က အဲလိုမျိုး ပြောတတ်ဖို့တော့ နည်းနည်း ခက်ချင်တတ်သဗျ။
Yesterday at 09:59 · LikeUnlike ·
Aye Win: ဆရာမြတို့ ဆရာတာရာတို့ ဘာလဲဆိုတာ တကယ်ပဲ မသိတာလားဗျာ……။ အဲဒီခေတ်က နီတဲ့ ဖက်ရှင် ရှိသတဲ့လား…..။ သြော်…….။ မြန်မာစာပေနယ်ကို ကွန်မြူနစ်တွေ ကြီးစိုးတာ ဘယ်ခေတ်လဲဗျ။ (၁၉– – ၁၉–) ပေါ့ဗျာ။ အများသိရအောင် ဖော်ပြပေးပါ။ စာပေစိစစ်ရေး မဖြတ်ပါဘူး… ခုခေတ် ဘယ်သူတွေ ကြီးစိုးနေပါသလဲ…….။ ကွန်မြူနစ်မှ မဟုတ်ရင် စာပဲ မရေးရတဲ့ အပေါက်မျိုးက ဘယ်မှာ ချိုးကြတာလဲ။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ဒါမှမဟုတ် အရက်ဖြူဆိုင်မှာ တိုက်တဲ့ မုန်တိုင်းတွေကို ကြည့်ပြီးများ ပြောလိုက်တာလား။ စာရေးဆရာတယောက် နံမည်ကြီးလာဖို့ဟာ ပရိသတ် တနည်းပြောရရင် ပြည်သူက လက်ခံမှပါ။
Yesterday at 12:38 · LikeUnlike ·2peopleLoading… ·
Atta Kyaw: ကျွန်တော့် စာကြောင့် ဆရာအေး စိတ်တိုသွားတယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော် ၀န်ခံပြီးသားပါ ဆရာအေးရယ်။ ကျွန်တော်က ခပ်တုံးတုံးပါလို့။ ဆရာမြတို့ ဆရာတာရာတို့လည်း တကယ် မသိတာခင်ဗျ။ နီမှန်းတော့ သိတယ်။ သို့သော် ဘာရယ်လို့ အတိအကျ မသိဘူး။ ခေတ်ကတော့ ကျွန်တော့် စိတ်ထင်… ၁၉၃၀-၁၉၉၀ လောက်အထိ ဖြစ်မလားပဲ။ ဆရာအေးစကားနဲ့ဆိုရင် ဟုတ်တယ်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ အရက်ဖြူဆိုင်မှာ တိုက်တဲ့ မုန်တိုင်းများလည်းပါတယ်၊ ပြီးတော့ စာမျက်နှာပေါ်က တိုက်ပွဲတွေ အရလည်း အဲသလို မနီရင် စာမရေးရတဲ့ အပေါက်မျိုးတွေ တွေ့ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဆရာအေး ပြောတာ ငြင်းစရာ မရှိပါဘူး။ ပြည်သူက လက်ခံမှ စာရေးဆရာ နာမည်ကြီးတာပါ။ အနုပညာ အားလုံးမှာ အဲဒီ့အတိုင်းပါပဲ။ သို့သော် ပြည်သူ့အတွက်ဆိုတာကြီးကိုတော့ ကျွန်တော် မခံစားတတ်တာခင်ဗျ။ အဲလိုဆိုရင် အဲဒီ့အနုပညာပစ္စည်းကို ဖန်တီးကတည်းက ရိုးသားမှု မပါတော့ဘူးလေ။ အနုပညာသည်ဟာ သူ့ဟာသူ စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ စိတ်ဆာလို့ကို ဖန်တီးတယ်လို့ ကျွန်တော် နားလည်မိလို့ပါ။ စိတ်မတိုပါနဲ့ ဆရာအေး။ ခံယူချက်ချင်း ဖလှယ်တယ်လို့ပဲ သဘောထားပေးစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
Yesterday at 12:48 · LikeUnlike · 1 person Kyaw Thu Yein Lwin likes this. ·
Arkar Sai Yin: နာရေး ကျေးဇူးတင်ကြောင်း သတင်းစာထဲထည့် ကြေငြာတဲ့ထဲမှာ စာရေးဆရာ တော်တော်များများ မပါကြပါဘူးပဲနော်။ ကိုယ့်ငါးချဉ် ကိုယ်ချဉ်နေရတဲ့ ကပြားတွေရဲ့ စာကိုဖတ်မှပဲ ဆရာဝန် ကောင်းကြောင်းလေးတွေ တွေ့ရတော့တယ်ဗျာ အဲဒါကြီးကိုတော့ သိပ်ဘ၀မကျဘူးဗျ ဆရာဝန်တွေကို အဆိုးနဲ့အကောင်း မျှကြည့်ပေးကြရင်တော့ ပိုကောင်းမှာပေါ့
Yesterday at 15:15 · LikeUnlike ·2people Loading… ·
Aye Win: စိတ်မတိုပါဘူးဆရာရယ်။ ခင်မင်မှုကို အရင်းပြုပြီး မေးခွန်းပြန်ထုတ်ကြည့်တာပါ။ ကျနော် မခင်မင်ရင် ဒါမျိုးကို ရှိပါစေဆိုပြီး အဖက်မလုပ်တတ်ပါ။ လိုက်ပိုက်ကြည့်နေတတ်ပါတယ်။ စာဖတ်ပရိသတ်ဟာ ပြည်သူပဲလေ။ သူတို့ ဖတ်ဖို့ စာရေးဆရာတွေက ရေးကြတာပဲ မဟုတ်လား။ ဒါကို ပြည်သူအတွက်လို့ ပြောတာ မလွန်ပါဘူး။ ကိုယ့်ခံစားမှု ကိုယ်ရေးပြီး၊ ကိုယ်ဖတ်ဖို့ ကိုယ်ရေးမှတော့ ဒိုင်ယာရီပဲ ရေးကြတာပေါ့… နော်။ ဒါမှမဟုတ်လဲ ကိုယ့်အချင်းချင်း လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တာပေါ့။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေစရာတောင် မလိုပါဘူး။ ဆရာပြောတဲ့ ၁၉၃၀- ၁၉၉၀ ခေတ်ဆိုတော့ နီမှ စာရေးဖြစ်မယ် မနီရင် စာရေးလို့ မရဘူးဆိုရင်… ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းတို့၊ မဟာဆွေတို့၊ မြမျိုးလွင်တို့၊ ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင်တို့၊ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးတို့၊ ဒဂုန်ခင်ခင်လေးတို့၊ ခင်နှင်းယုတို့၊ ကြည်အေးတို့၊ တက်တိုးတို့၊ သာဓုတို့၊ သော်တာဆွေတို့၊ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်တို့။ ခင်ဆွေဦးတို့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ နီလဲမနီ၊ ပြာလဲမပြာ၊ စိမ်းလဲမစိမ်း… ကလျာဝိဇ္ဇာသိပ္ပံ။ ဆွေလှိုင်ဦး၊ ဂျူး၊ နီကိုရဲတို့၊ ပရိသတ်တွေ ရှိလိုက်တာမှ ခိုင်ခိုင်မာမာ။See more
18 hours ago · LikeUnlike · 1 person Loading… ·
Atta Kyaw: ကျေးဇူးပါ ဆရာအေး။ ဆရာအေး ပြောတာလည်း မှန်တာပဲ။ ဆရာမှိုင်းမှသည် ဂျူး၊ နီကိုရဲအထိ အရောင်မဲ့ခဲ့ကြတာ အမှန်ပါပဲ။ သို့သော် ဆရာဘုန်းနိုင်နဲ့ ဆရာဝင်းဦးတို့ကိုတော့ အနီတွေက တော်တော်လေး ပုတ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့ဖူးတာ ကျွန်တော် မှတ်မိနေသေးတယ်။ ၀င်းဦးရဲ့ “မိန်းမလှ အမုန်း” ထဲမှာ ဇာတ်လိုက်က “စာအုပ်ကြီးသမားတွေကို မမုန်းပါဘူး၊ စာတစ်အုပ်တည်း သမားတွေကိုသာ မုန်းတာပါ”ဆိုပြီး အမှတ်မထင် ပြန်ရေးထားတာလေး မှတ်မိနေတယ်။ အလားတူပဲ ဆရာဘုန်းနိုင်လည်းပဲ သူ့ဝတ္ထုတွေထဲကနေ အနီတွေကို ပြန်ပြောခဲ့ရတာတွေ ရှိဖူးတာ ဆရာအေးလည်း မှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ အနီဆရာတွေက မနီဘဲ ရေးရင် မှားနေသယောင် ပြောခဲ့တာတွေ နားနဲ့ မဆံ့အောင် ကြားးခဲ့ဖူးတာမို့ “မနီရင် စာပဲ ရေးလို့ မရမယ့် အပေါက်မျိုး ချိုးကြတယ်” လို့ ကျွန်တော် ရေးလိုက်တာပါ ဆရာအေးရယ်။ သို့ပေမယ့် ဆရာအေး ပြောသလိုပဲ မနီတဲ့ဆရာတွေ အများကြီး ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ အခု ရေးရင်းနဲ့မှ သဘောပေါက်လာတယ်။ ဟိုဆရာက မင်းသိင်္ခကို ဖဲ့လိုက်တာလည်း တကယ်တော့ RF ဆိုတဲ့ အခံနဲ့ ဖဲ့လိုက်တာ ဖြစ်မှာ။ ကျွန်တော်က ကြားချောင်က ဘုမသိ ဘမသိ (ကလေး အတွေးနဲ့) ၀င်ရေးမိသွားခဲ့တာ ဖြစ်မှာဗျ။
18 hours ago · LikeUnlike ·
Aye Win: တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ကလည်း ညီမလေးရယ်စိုးရိမ်မိတယ်စာအုပ်မှာ “မာ့က်စ်ဝါဆိုတာ ပေါက်ပင်ဘာလို့ကိုင်းရတယ်၊ ဗျိုင်းနားလို့ ကိုင်းရတယ်..” တဲ့လေ။ သော်တာဆွေဆိုရင် ရိသလိုလို ပြောင်သလိုနဲ့ ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေ အမြဲ လုပ်တတ်ပါတယ်။ သာဓုရဲ့ တပ်ထဲက မြတ်ကိုကို စာအုပ်ကော။ ဖဆပလက ကျောင်းသုံးတောင် လုပ်လိုက်သေးတယ် ထင်တယ်။ သာဓု သားတွေ နေရင်းထိုင်ရင်းနဲ့လည်း ၀တ္ထုတွေထဲ ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေ ရေးလေ့ရေးထ ရှိပါတယ်။ ပန်းတိုင်းပွင့်ပါစေလား….. ဆရာရယ်။
ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမဆို စာပေဂိုဏ်းတွေဟာ တဂိုဏ်းနဲ့တဂိုဏ်း ပုတ်ခတ် တိုက်ခိုက်ကြစမြဲပါ။ လက်ဝဲဂိုဏ်း၊ လက်ယာဂိုဏ်း ဘာဂိုဏ်း ညာဂိုဏ်း….
17 hours ago · LikeUnlike · 1 personLoading… ·
Atta Kyaw: ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာအေး။ ပန်းတိုင်းပွင့်ပါစေကို ကျွန်တော် ခြွင်းချက် မရှိ သဘောတူပါတယ် ဆရာအေးရယ်။ ပွင့်လည်း ပွင့်စေချင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ကျွန်တော့်မှာ ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက်တွေ ရှိနေတယ်ဗျို့။ ကျွန်တော် ပွင့်မယ် လုပ်တိုင်း ကျွန်တော့်ကို အတင်းလိုက်ပြီး ချိုးဖဲ့ဖျက်ဆီးဖို့ ကြံတာ အကြိမ်ကြိမ် ခံခဲ့ရဖူးတယ်။ အဲသလို ချိုးဖဲ့သူတွေက များသောအားဖြင့် အဲဒီ့အရောင်တွေနဲ့ ဖြစ်နေခဲ့ဖူးတာမို့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ကျန်နေတာပါ။ ကျွန်တော် ဘယ်တုန်းကမှ အဲဒါတွေကို မတုံ့ပြန်ခဲ့ဖူးသလို သည်စကားတွေကိုလည်း အရင်က တစ်ခါမှ မပြောဖူးဘူး။ ဆရာအေး စလိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့ ပြောဖြစ်ကြရင်းက မသိတဲ့ လူငယ်လေးက ၀င်မေး၊ သူမေးတော့ ကျွန်တော်လည်း ရင်ပွင့်လေသောအခါ ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ ဆရာအေးရေ။S
Kalay Lu: ဆရာ တော်တော်ကလေးဆန်ပါလား..
16 hours ago · LikeUnlike ·
Atta Kyaw: ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ လူတစ်ယောက်ကို တံဆိပ်ကပ်ရတာ သိပ်လွယ်ပါတယ် ဆရာ “ကလေးလူ”။ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့်နဲ့ ဘာက ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့ ပြောရတာက နည်းနည်း ပိုခက်ပါလိမ့်မယ်။ ခက်တာလေးကို ကြိုးစားပြီး ပြောပြရင် ပိုကျေးဇူးတင်မှာပါဗျာ။
Kalay Lu: ဆရာစိတ်ဆိုးသွားရင် ဆောရီးပါ..ဆရာ့ကို ကျနော် ဘာတံဆိပ်မှ မခတ်ပါဘူး။ ဆရာက ကျနော် လေးစားတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ပါ။ ဆရာ့စာတွေလဲ ကျနော်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ အခု ပို့စ်မှာတော့ ဆရာ ကလေးဆန်တယ်လို့ ခံစားမိလို့ပါ.. :]
15 hours ago · LikeUnlike ·
Aye Win: မစွမ်းရင်းက ရှိလို့ ကန်စွန်းခင်းက ညိတာလား ဆရာ ဆူဒိုနင်ရေ။ ခွေးရူး ကိုက်ခံရအောင် ကိုယ်ကလည်း စောင်းငန်း စောင်းငန်းများ သွားလုပ်မိလို့များလား ဆရာ။ ဆရာ့ကို ချိုးနှိမ်ကြတာ ကျနော်လည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး။ မင်းဖြစ်မယ့်လူက ရောင်ကလေးနဲ့။ ခွေးရူး အကိုက်ခံရမယ့်သူကလည်း စောင်းငန်း စောင်းငန်းနဲ့တဲ့။ သြော်… လောကကြီးနှယ် ဂွကျလိုက်တာနော်။See more
Atta Kyaw: စိတ်မဆိုးပါဘူးဗျာ။ ဆရာတို့ မကွေးဆေးက တစ်ယောက် ကျွန်တော့်ကို FB ပေါ်က ကျွန်တော့် နံရံပေါ်မှာ တစ်တစ်ခွခွ ဆဲသွားတုန်းကတောင် ကျွန်တော် ဘာမှ ပြန်မပြောခဲ့သလို တုန်လည်း မတုန်လှုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ကလေးဆန်တယ်လို့ သတ်မှတ်တာဟာ တံဆိပ်ကပ်တာ (labelling or judgment) မဟုတ်ဘူးလား ဆရာ။ ဘာ့ကြောင့် သည်ပို့(စ်)က ကလေးဆန်တယ်လို့ ပြောရတာလဲဆိုတာကို ကျွန်တော် နားမလည်တာ အမှန်ပဲခင်ဗျ။ ဘယ်စာကြောင်း၊ ဘယ်ဝါကျမှာ ဘယ်လို ရေးလိုက်တာကဖြင့် ကလေးဆန်တယ်လို့ ခံစားရစေတယ်ဆိုတာမျိုး အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ပြောလာတာမျိုးကို ကျွန်တော် ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အိမ်ထောင်ရေး ဘ၀မှာပါ အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့ရတာ အပါအ၀င် ဖြစ်ရပ်ဆိုး သုံးခုကို ရေးပြတဲ့အတွက် ကလေးဆန်တယ်လို့ တံဆိပ် ကပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဘာအဖြစ်ဆိုးတွေပဲ ဖြစ်လာလာ ရေငုံနှုတ်ပိတ်ပြီး ခေါင်းငုံ့ခံနေမှ လူကြီးဆန်မယ်ဆိုရင်လည်း လူကြီးမဆန်ပါရစေနဲ့တော့ ဆရာရေ… ကလေးပဲ ဆက်ဆန်နေပါရစေတော့…
Aye Win: မကွေးဆေး ဆိုတာ ဘာများလဲ ကိုယ့်လူ။ ဝေါဟာရ အထူးအဆန်းပါလား။ မကွေး ဆိုတဲ့ မိန်းမကြီးရဲ့ ဆေးက ဘာများပါလိမ့်။ ရှမ်းပျိုမယ်လား၊ ပွဲကတော် အုပ်ဆေးလား။
Kalay Lu: ဟဟ ဆရာတော်တော်နောက်တာပဲ..လူရွှင်တော်လုပ်ပါလား..
Atta Kyaw: ဆရာအေးက မြန်မာနဲ့ ဝေးတာ ကြာသွားတော့ မသိဘူးကိုး။ မကွေးမှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ တတိယမြောက် အရပ်သား ဆေးတက္ကသိုလ်တစ်ခု ထပ်ဖွင့်ထားတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒါကို မကွေးဆေးလို့ ပြောတာ။ ကျွန်တော့်ကို ကလေးဆန်တယ် ပြောတဲ့ ဆရာလေးက အသက် ၂၃ နှစ် မပြည့်သေးတဲ့ မကွေးဆေး ကျောင်းဆင်းလေးပါခင်ဗျာ။
Kyaw Thu Yein Lwin: ကျေးဇူးပါပဲ ဆရာရေ.. တော်တော်လေးကို သဘောပေါက်သွားပါပြီ ဆရာ.. ဆရာတို့ ဆွေးနွေးကြတဲ့ အကြောင်းအရာကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ တကယ်ကောင်းပါတယ် ဆရာ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ဆရာ..
14 hours ago · LikeUnlike ·
Master-minded Antagonist: ဆရာ ရေးတာ မှန်ပါတယ်ဗျ… မဟုတ်တာကတော့ အဲဒီစာတွေရဲ့ အောက်က comment ရေးတဲ့ လူအချိုUပါ… နေရာတိုင်းမှာတော့ negligence ဆိုတာ ရှိစမြဲပါ.. နိုင်ငံခြားမှာလည်း ရှိတာပါပဲ… နိုင်ငံခြားလို တရားစွဲချင်ရင် နိုင်ငံခြားမှာလို ဆေးကုသစရိတ် ပေးဖို့လိုမယ်ဗျ…… ဒါမှတရားစွဲရင် လျော်စရာရှိမှာပေါ့။ အခှ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ လုပ်နေတဲ့ ဆရာကြီးတွေကို လာကြည့်ကြစမ်းပါ။ လခလေး တစ်ပဲခြောက်ပြားနဲ့ မတန်အောင် အလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်။ ရှိတဲ့ facilities ကလည်း နိုင်ငံခြားနဲ့ အကွာကြီးပါ။ အဲလို အခြေအနေမှာ လူနာတွေရဲ့ ငွေရေးကြေးရေးအနေအထားကိုလည်း ကြည့်ရပါသေးတယ်။ စေတနာရှိတဲ့ doctorက မတတ်၊ တတ်တဲ့သူက မောက်မာတယ်လို့လည်း ပါပါသေးတယ်။ အဲဒီလူကို မေးချင်တာက သူ survey ကောက်ထားသလား၊ သူပြောသလိုဖြစ်နေတဲ့ ဆရာဝန် ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိလဲ။ စာရင်း ဇယားလေးနဲ့ ခြေခြေမြစ်မြစ်ပြောရင် ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဆရာဝန်တွေ ဆရာဝန်တွေဆိုပြီး ၀ါးလုံးသိမ်းမရိုက်ပါနဲ့။ ဆေးလောကမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ အခြားနယ်ပယ်တွေမှာလည်း negligence တွေ… ethic နဲ့ မညီတာတွေ ရှိဦးမှာပါ။ အဲဒါတွေကိုလည်း ဖော်ထုတ်ပေးကြပါဦးလေ…။
about an hour ago · LikeUnlike ·
Arkar Sai Yin: ဆရာဝန်တွေ အတင်းအုပ်နေရင်းကနေ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး အလံနီတွေ အလံဖြူတွေ ဖြစ်သွားမှန်းကို မသိပါဘူး လိုက်လို့ကို မမှီတော့ပါဘူး
Nyein Chan: not need to read man , ရေးချင်တိုင်းလက်လွတ်စပယ်ရေးပီးမှ ထောက်ခံမှုရော မထောက်ခံမှုရော လိုလားနိုင်လက်ခံနိုင်မှ ရဲရင့်သောနှလုံးသား ပီသပါတယ်။ လက်ခုပ်သြဘာ တီးတဲ့ပို့ စ်တွေပဲ ဦးလေးwall ပေါ်ရှိနေချင်တဲ့ စိတ်ကို သတိပြုပါ။ သိပြီးသားပဲ။ ဦးလေး ကျွန်တော့်ပို့ စ်ကို detag လုပ်လိမ့်မယ် ဆိုတာ။ မထားရဲဘူးဆိုတာ။ ခွဲစိတ်မှုတခုမှာ uterus လို ဟာမျိုးမပြောနဲ့ ။ အသက်တောငf သေချင်သေသွားမှာပါ။ surgeon တွေဆိုတာ နိုင်ငံတော်ကရော ခိုင်မာဖြိုဖျက်မရတော့တဲ့ ပညာတတ်အသိုင်းအ၀ိုင်းကပါ အသိအမှတ် ပြုပြီးသား။ bladder ကိုထိုးမိလို့TAH လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားကို ထွက်ကတည်းက ဆရာဝန်တွေ အားလုံးရယ်ချင်မိမှာပါ။ bleeding တွေတအား pump ဖြစ်နေရင် တော့ ခင်ဗျားမိန်းမမှမဟုတ်ဘူး president မိန်းမသားအိမ်လည်း ထုတ်ပစ်မှာပဲ။
54 minutes ago · LikeUnlike ·
Nyein Chan: ဦးလေးတို့ သိထားစေချင်တာက စကားကြီးစကားကျယ်ပြောရရင်ဗျာ။ သံသရာဆိုတာ ရှိနေသရွေ့အနာရောဂါဆိုတာရှိနေသရွေ့  ဆရာဝန်ဆိုတာရှိနေ မှာပဲ။မီဒီယာတွေဖျောက်ဖျက်လို့ ပျောက်ပျက်ရမယ်ဆိုရင်တော့လည်း ဟာသဖြစ်သွားမှာပေါ့။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက ဒီထဲဘာလို့ ပါလာတာလဲ မသိဘူးနော် ။ သူ့ ကိုပြောထားတာလည်း ဖတ်ကြည့်ပါဦး။ နည်းနည်း။ သူကဆရာဝန် တယောက် ။ သူ့ အဖေက MS ဆေးရုံအုပ်။ သူ့ အမျိုးအနွယ်ထဲမှာ အညတြ တယောက်မှမရှိဘူး။ ပြီးတော့ သူတို က ယုတ်ယုတ်ကမ်းကမ်း ပြောဖို့ နေနေသာသာ …ီးးးးးးးး ဆိုတဲ့ စကားတောင် ဆဲတတ်တာ မဟုတ်ဘူး။
39 minutes ago · LikeUnlike ·
Nyein Chan: သူ့ ကို ခွေးရူး ပြောတာ သူ တုန့်ပြန်ထားတာ ကိုကြည့်ပါ။ ဘယ်လောက်ယဉ်ကျေးလဲ။ ဆရာလား…. နည်းနည်းပြန်ဆန်းစစ်ပါ။ ဒါပါပဲ။ တော်ပြီ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေ ကုန်တယ်။ အားလုံးပဲ။ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အမျိုးအနွယ်ကိုထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ခြင်းဟာ မင်္ဂလာတပါးပဲ မဟုတ်လား။ မှတ်ထားပါ ကျွန်တော့်ကို မကြာခင် စာပေနယ်ထဲ ၀င်လာတော့မှာပါ။ နော်မာန်ဈာန်ပါ။ ကျွန်တော်တို က အငြိုးမထားပါဘူး။ ဦးလေးဝေါပေါ်လည်း ရေးဖို့ စိတ်ကူးမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းပါလာလို့သာ ရေးရတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော့် ဝေါပေါ် ခေါ်လိုက်တာ။ လာဖတ်ကြည့်ပါ ။ ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေဆရာတွေ ဘာရုန့် ရင်း ကြမ်းတမ်းတာ ရေးလဲလို့ ။ ခုလို အတိုင်အဖောက်ညီညီ လှော်ဖို့ နေနေသာသာ။
38 minutes ago · LikeUnlike ·
Atta Kyaw: ဆရာလေး ကိုငြိမ်းချမ်း… ဆရာလေးရဲ့ တစ်ဖက်သတ်အမြင်နဲ့ စွပ်စွဲလွယ်တဲ့ ၀ါသနာက ကျွန်တော် ဆရာလေးရဲ့ post ကို detag လုပ်တာအပေါ်မှာ သုံးသပ်ပုံလေးနဲ့ ထင်ရှားနေစေပါတယ်။ ဘယ်သူပဲ tag လုပ်လုပ်၊ ကျွန်တော် အမြဲတစေ detag လုပ်ပါတယ်ဗျာ။ အဓိကက ကျွန်တော့် မေး(လ်)မှာ အဲဒီ့ ပို့(စ်)မှာ ရေးသမျှ comment တွေများရင် များသလောက် စာဝင်ကြောင်း ပြတာတွေ များတတ်လွန်းလို့ ကျွန်တော်က ဘာကိုမဆို detag အမြဲလုပ်သဗျ။
ကြည်နူးစရာ ကောင်းတာ တစ်ခုတော့ ရှိတယ် ဆရာငြိမ်းချမ်းရေ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၉ နှစ်က ဂျာနယ် စာမျက်နှာပေါ်မှာ အထင်ကရ ပါတဲ့ စာမူဟာ အခုအချိန်အထိ လှုပ်ခတ်နိုင်စွမ်း ရှိနေသေးတဲ့အတွက် ကြည်နူးတာပါ။See more
Atta Kyaw: ဆရာလေး ကိုငြိမ်းချမ်းက အထင်နဲ့ ထပ်မံပြီး စွပ်စွဲပြလိုက်ပြန်ပြီ။ ဆရာလေး အပါအ၀င် ကျွန်တာ့် wall မှာ ရေးသမျှ လူအားလုံး ကျွန်တော့် FB မိတ်ဆွေတွေ ချည်းပါပဲ။ အများစုက လူချင်း မသိပါဘူး။ FB ပေါ်မှာမှ သိတာပါဗျာ။ အဲဒါကိုပဲ အတိုင် အဖောက်ညီညီ ဆိုပြီး တစ်ဖက်သတ် စွဲချက် ထပ်တင်လိုက်ပြန်တယ်။ ကျွန်တော် သည်မှာ ပြန်ရေးခဲ့သမျှတွေကို ပြန်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ရုန့်ရင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်း ဝေးစွ၊ ကိုယ့်သားအရွယ်လေးတွေကို သူတို့ရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ “ဆရာ”ဆိုတဲ့ အသုံးပံ တောက်လျှောက် သုံးနေတာကို သတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်။
27 minutes ago · LikeUnlike ·
Atta Kyaw: ဆရာဝန်တွေ ပျောက်ပျက်စေချင်လို့ ရေးတဲ့စာလား၊ အပုပ်နံ့ လှိုင်လှိုင်ထနေတဲ့ ဆေးလောကကြီး ပိုကောင်းလာစေချင်လို့ ရေးတာလားလောက်တောင် လူငယ်လေးတွေ တန်မဲ့နဲ့ ခွဲခြား မသိတာတော့ အနာဂတ်အတွက် စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ တကယ်ကို ရင်ဆို့အောင် ၀မ်းနည်းမိပါတယ်။ လူ့လောကထဲကို အခုမှ တိုးဝင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ လူငယ်လေးတွေ နက်နက်တွေးတတ်လာကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရုံမှတစ်ပါး ကျွန်တော်ကရော ဘာများ တတ်နိုင်ပါဦးမည်နည်း…
7 minutes ago · LikeUnlike ·
အထက်က ဟာတွေကို ပြန်ကူးပြီး အဆင်ပြေအောင် နေရာ အစိပ်အကျဲလုပ်ပြီးချိန်မှာ ကျွန်တော် နောက်ဆုံး မှတ်ချက် ရေးခဲ့တာ နာရီနဲ့ ချီသွားပါပြီ။ နောက်ထပ် ဘာမှတ်ချက်မှ ထပ်တက်မလာသေးပါ။
Thet Lynn says:
17 September 2010 at 9:32 pm
အဲသလို မှတ်ချက်လေးတွေ စောင့်နေတယ်ဆိုကတည်းက
စကားနိုင်လုပြီး အနိုင်ယူချင်နေတဲ့ စိတ်ကလေးက ပေါ်လွင်နေတယ်ဗျာ။
မဆိုးပါဘူး၊ ဆရာ့စိတ်ဓာတ်က အားကျ၊ အတုယူစရာပါပဲနော်။
လောက ကြီးကို လှနေရောပဲ။
စာတွေ ဆက်ရေးဗျာ၊ လောကကြီးအကြောင်းကို အရမ်းကို ထဲထဲဝင်ဝင်သိထားတဲ့
အခုလို စာတွေရေးပြီး အသိပညာတွေ မျှဝေနေတာ ကောင်းတယ်ဗျာ။
ဆရာ အောင်မြင်ဦးမှာပါ။ ရှေ့လျှောက် အင်မတန်အောင်မြင်ဦးမှာ။
ဒီလို နည်းလမ်းလေးတွေ သာဆက်သုံးနေဗျာ။
( ရိုင်းရိုင်းမပြောဘဲ ယဉ်ယဉ်လေးပြောရရင်တော့ ” ၀မ်းနည်းပါတယ်ဗျာ ” )
18 September 2010 at 11:56 am
အခုလို တစ်ဖက်က ပြန်လာမယ့် မှတ်ချက်တွေကို စောင့်နေတယ်ဆိုကတည်းက
ဆရာ့ရဲ့ အင်မတန် မွန်မြတ်လှတဲ့ စကားနိုင်လုကာ အနိုင်ယူလိုခြင်းဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က
ရည်ရွယ်ချက်လေးရော၊ ဖော်ဆောင်ချက်လေးရော၊ အားကြီးကောင်း။
ဆက်သာ ကြိုးစားနေပါ ဆရာ၊ အောင်မြင်ဦးမှာပါ။ ဒီလိုနည်းလမ်းတွေတော့ များများလေး သုံးပေးပေါ့။
လူတိုင်းလိုလို ကြိုက်ကြတယ်လေ၊ သူများအကြောင်း ဘက်လိုက်မှုကင်းကင်းနဲ့ ဝေဖန်ချက်လေးတွေ များများရေးပေးပေါ့။ အောင်မြင်သမျှ ကမ္ဘာတောင် ကျော်သွားဦးမှာ။
ကျွန်တော်ရွဲ့စောင်းပြီး ရေးထားတာ ရိုင်းသွားရင်လည်း … … ၀မ်းနည်းပါတယ်ပေါ့ဗျာ။
Khin Moe Oo says:
14 September 2010 at 6:29 pm
အပုပ်နံ့ လှိုင်လှိုင်ထနေတဲ့ ဆေးလောကကြီး ပိုကောင်းလာစေချင်လို့ ရေးတာလား Is it sure?? I want to know it’s ur true intention of this post .If it is true ,I apologize for my comment.Thanks for intention sayar.
14 September 2010 at 6:32 pm
If ur intention is really sure, I apologize for my words.
14 September 2010 at 7:26 pm
ဆရာမ ဒေါ်ခင်မိုးဦး ခင်ဗျား
ဟိုဆရာလေး ငြိမ်းချမ်းဆိုသူ ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ၊ လူရှိနေသမျှ ဆေးဆရာ၊ ဆရာဝန်တွေ ရှိနေမှာပါပဲ။ ဆေးဆရာတွေ၊ ဆရာဝန်တွေဟာလည်း လူတွေ ဖြစ်တာနဲ့ အညီ အမှားတွေ လုပ်မိတတ်ကြမယ်ဆိုတာ ဆရာမလည်း ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လက်ခံနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်၊ နှစ်စုံနှစ်ယောက်၊ သုံးစုံ သုံးယောက်လောက်ရဲ့ အမှားကို အရင်းအတိုင်း ပြန်လည် ရေးသားခြင်းဟာဖြင့် ဆေးဆရာလောက၊ ဆရာဝန်လောက၊ သမားတော်လောကကြီး တစ်ခုလုံးကို သိမ်းကြုံးပြောတာ မဟုတ်တန်မှန်း မြန်မာစာ ကောင်းကောင်း ရေးတတ် ဖတ်တတ်သူတိုင်း နားလည်လိမ့်မယ်လို့ (လွဲမှားစွာ) ယူဆမိတဲ့အတွက် ဘာမှ ရှည်ရှည် ဝေးဝေး ရှင်းမပြခဲ့တာပါ။ နောက်ဆိုရင် ထိပ်ဆုံးကနေ စာလုံးမည်းကြီးနဲ့ “ဆေးဆရာများ အားလုံးကို ရည်ရွယ်တာ မဟုတ်ပါခင်ဗျား”လို့ ရေးရတော့မလိုတောင် ဖြစ်နေပါပြီ။
ဆရာမလည်း သတိထားမိမှာပါ။ ဆေးလောကက သိပ်ကို အပုပ်နံ့လှိုင်နေပါတယ်။ ဒါလေးတွေ ဒါလေးတွေကို ဂရုတစိုက်နဲ့ မလစ်ဟင်းအောင် ကြိုးစားသွားကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ၁၉၈၀ မတိုင်ခင် နှစ်များဆီကလို လေးစား ကြည်ညိုထိုက်တဲ့၊ အားကိုးထိုက်တဲ့ ဆေးလောကမျိုး ပြန်လည် ပေါ်ပေါက်လာအောင် တောင့်တမိတဲ့ စိတ်နဲ့ ရေးလိုက်တာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း ဒါတွေ ရေးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်က သမားတော် အတွက်မှားလို့ ထိုင်းမှာ ဆေးသွားကုနေရသူ ရွှေအမြုတေ စာတည်းချုပ် ဆရာ ၀င်းငြိမ်းလည်း မကြာမကြာ ရေးဖူးပါတယ်၊ နိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယ၀န်ကြီး လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာရေးဆရာ မောင်ဆွေသက်လည်း ရေးဖူးပါတယ်။ မကြာသေးခင် နှစ်လလောက်အတွင်းကပဲ အလင်းတန်း ဂျာနယ်မှာလည်း ကျွန်တော် အမည် မမှတ်မိတော့တဲ့ ဆရာတစ်ယောက်လည်း ရေးဖူးပါတယ် ဆရာမရယ်။
ရိုးသားစွာ ကြိုးစား ဆောင်ရွက်နေတဲ့၊ အနစ်နာခံနေတဲ့ ဆရာဝန်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် မငြင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်လို မန္တလေးလို မြို့ကြီးတွေမှာတော့ အဲလို ဆရာမျိုးတွေ အတော်ရှားလှတာမို့ မြင်တောင် မမြင်ဖူးဘူးလို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာတိုင်း(မ်)မှာတော့ အငြိမ်းစား ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦး ကြော်ငြာထားတာ တွေ့ဖူးတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဖုန်းနံပါတ်အတိုင်း ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးက သက်ကြီးရွယ်အိုတွေထဲက ငွေကြေးမတတ်နိုင်သူတွေ၊ ရဟန်းသံဃာတော်တွေကို အခမဲ့ ကုသပေးနေပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုလည်းပဲ အဲလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အခက်တွေ့နေရင် သူ့ဆီ လွှတ်ပေးပါလို့ မှာပါတယ်။ ကျွန်တော့် တစ်သက်မှာ အဲလို ဆရာဝန်ကြီးမျိုး အဲဒီ့တစ်ယောက်ပဲ တွေ့ဖူးပါသေးတယ် ဆရာမရယ်။
အဲလို ရေးလိုက်လို့ အခမဲ့ ကုပေးရမယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ယူတာလည်း ယူကြပါ။ တတ်နိုင်တဲ့သူက တတ်နိုင်သလို အကုန်ခံကြလိမ့်မပေါ့။ လူနာကို သူတို့နည်းတူ လူသား တစ်ယောက်လိုလေးပဲ ရိုင်းပင်းစိတ်ကလေး မွေးပေးဖို့ လိုနေတာပါ။ အခုဟာက လူနာတွေကို ပိုက်ဆံထွက်တဲ့ ကိရိယာတွေလို သဘောထားနေသလား အောက်မေ့ရလောက်အောင် “လာ… လှန်… ပြ… ရော့… သွား… နောက်တစ်ယောက်လာ”ဆိုတဲ့ နှုန်းနဲ့ ငါးမိနစ်အတွင်းမှာ လူနာ သုံးယောက်လောက်ကို စစ်ဆေးနေသူတွေနဲ့ hypermedicalisation သန်လွန်းနေသူတွေက ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန် မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာ နည်းနည်း များပြားနေပါတယ်။ သည်ကြားထဲ ပေါ့လျော့မှုတွေကလည်း သည်ဘက်ခေတ်မှာ သိပ်အဖြစ်များလာသလားလို့ တွေးမိရလောက်အောင် ကြားရဖန်များလာလို့ သည်စာတွေကို ရေးနေတာပါ။
ဖတ်မိတဲ့သူတွေက မခံချင်စိတ်နဲ့ ပြုပြင်သွားကြမယ်ဆိုရင် ဆေးလောကကြီးဟာ တစ်ချိန်ကလို ရွှေရောင် ပြန်လည်တောက်ပလာမလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက် ပါးပါးလေးနဲ့ ရေးတာပါ ဆရာမ။
ဆရာမရဲ့ မှတ်ချက်အတွက် တောင်းပန်စရာ မလိုပါဘူးခင်ဗျား။ ဆရာမ အခုလိုတွေ ရေးတော့ ကျွန်တော့်ဘက်က ကျကျနန ပြန်လည် ရှင်းလင်းခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ကတောင် ကျေးဇူးအထူးတင်ရမှာပါခင်ဗျား။
တွေးဆ ဆင်ခြင်ကြည့်နိုင်ပါစေ ခင်ဗျား
18 September 2010 at 6:27 pm
ရွှေပြည်ဟိန်း ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း ကိုသိပါသလားရှင့်။ကျိုက္ကဆံ စူပါဝမ်းနားမှာပါ။
ဆရာဝန် အားလုံး လုပ်အားပေးတွေပါ။ဆေး ပါလှူပါတယ်။
15 September 2010 at 4:00 pm
ကင်ဆာရောဂါ ( ရောဂါတော့ကျွမ်းနေပြီ ) ဖြစ်နေတဲ့ လူနာတစ်ယောက်နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကို ကုနေတဲ့ဆရာဝန်က ခေါ်ပြောသတဲ့၊ စားချင်ရာ စားလို့ရပြီ၊ လုပ်ချင်ရာလုပ်လို့ရပြီ၊ နောက်ဆုံးချိန်ရောက်နေပြီ
ကုလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီး….။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ရောဂါခံစားနေတဲ့ လူနာကို အဲဒီလိုပြောသင့်သလား၊
ပြောခွင့်ကော အဲလိုသမားကျင့်ဝတ်မှာ ရှိသလားသိပါရစေ။
လူနာက နောက်သုံးရက်လောက်မှာဘဲ ဆုံးသွားရှာတယ်၊ သူကတဖြည်းဖြည်း သက်သာလာမယ်ထင်ပြီး
ရွှင်ရွှင်လန်းလန်း ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ရှိနေတုန်း….အဲဒီစကားကြီးကြားလိုက်တော့..ခေါက်ခနဲ ဆုံးသွားတာဆရာရေ…။
15 September 2010 at 4:36 pm
သမားကျင့်ဝတ် ဘယ်လို ရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် မသိပါ။ သိသူများ ဖြေကြားပေးကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
16 September 2010 at 3:28 am
ဒါလေးလည်း ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။ ဆရာ မှော်ဝန်း ကြည်မြတ် ရေးတဲ့ “နှစ်သောင်းတန် စကားတဲ့လား” ဆောင်းပါးပါ။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့ နေ့စွဲပါ “အလင်းတန်းဂျာနယ်” အမှတ်စဉ် ၆၁၅ မှာ ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
16 September 2010 at 10:58 pm
ဆရာ အတ္တကျော် ပြောသွားတာလေးတွေ၊ အခြားသော သူတွေရဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေကို
ဖတ်ပြီးသွားတော့ ရင်ထဲကို ထိသွားတယ်ဗျ။ လှုပ်ခတ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ။
နောက်ပြီးတော့ ဆရာအတ္တကျော်ဟာ မြန်မာစာအရေးအသားကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာအပြင်
အင်မတန် ပညာပြည့်ဝပြီးတော့ လူတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို ထဲထဲဝင်ဝင် သုံးသပ်နိုင်ပုံပဲဗျ။
မဆိုးဘူးဗျ၊ ( စကားချပ်။ ။ ဆရာလိုလို သမားလိုလို လေသံနဲ့ ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ။ )
ဆရာ အတ္တကျော်လို လူတစ်ယောက် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ရှိနေတာ တစ်အားပါပဲဗျာ။
အဖြစ်အပျက်တွေကို သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာ ဘက်လိုက်မှုကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ သုံးသပ်ပြနိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်ခံစားမိတယ်ဗျ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ပေါ့လေ။ အဲဒီ ခံစားချက်က အမှန်တရား၊ အရှိတရားနဲ့ ထပ်တူကျ၊ မကျဆိုတာတော့ ကျွန်တော်လည်း ဥာဏ်မမီဘူးဗျာ။
အမျိုးမျိုးသော လူသားတွေရဲ့ ရင်ထဲက အမျိုးမျိုးသော စေတနာ၊ စေတသိတ်တွေကိုလည်း ဆရာက ၀င်ရောက်ခံစားပေးပြီး ရေးထားတွေကို ကျွန်တော် မြင်ရ၊ ခံစားရတယ်ဗျ။
လောကကြီးဟာ မတူညီမှုတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်း စုဖွဲ့နေပြီး၊
အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံသော မတူညီမှုတွေရဲ့ ရောသမမွေ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အလှတရားတွေကိုလည်း
စာရှုသူတွေရဲ့ ရင်ထဲကို လင်းခနဲ မြင်နိုင်အောင် ခေါ်သွားနိုင်တယ်ဗျ။
” အပြစ်အားလုံးရဲ့ အခြေခံဟာ စကားတွေပါ ” ဆိုတဲ့ အယူအဆလေး ( အယူအဆမျှသာ ) အတိုင်းပဲ ဆရာဟာ မလိုအပ်တဲ့ စကားလုံးတွေကိုပယ်၊ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ကို ခဏတဖြုတ်မေ့ထားပြီး၊
လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းငယ်လေး ( ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုလုံး ) ကို စကားလုံးတွေနဲ့ ထိထိမိမိ ဝေဖန်သွားလိုက်နိုင်တယ်။
အခုလို အမှန်တရားကို ကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့ စာတွေ၊ ဘယ်လိုမျိုးရှုထောင့်ကနေပဲကြည့်ကြည့် ပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်တဲ့၊ သုံးသပ်ချက်တွေကို တစ်ဖက်သူတွေနဲ့ အပြိုင် စကား ကြွယ်ကြွယ်၊ အလှတွေမခြယ်ပဲနဲ့ လူတွေရဲ့ ရင်ထဲကို အရောက် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ကြည်နူးမိတယ်ဗျ။
ဆရာ့ကို အားလည်း ကျမိပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော ခုလို ရှည်လျားထွေပြားပြီး၊ေ၀၀ုစ်ပရိယာယ်တွေ၊ ရောင်စုံ အတ္တတွေပေါင်းစုံနေတဲ့ လူ့ပြည်လောက၊ ဘုံဘ၀ကြီးမှာ၊ ဆရာ အတ္တကျော်ကနေပြီး၊ အနတ္တရဲ့ သဘောတရားတွေကို ရှင်းခနဲ၊ ထင်းခနဲ
အခုကိစ္စမှာ ဆရာ အတ္တကျော် မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာထက်၊
ဆရာကို ဆန့်ကျင်ပြီး ပြောဆိုရေးသားနေကြတဲ့သူအချို့ မှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာတွေထက်၊
အားလုံးသောသူတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ လူ့လောကကြီးကို လှပနေအောင် ကိုယ်တတ်စွမ်းသမျှနဲ့ အင်အားနဲ့ အရောင်ခြယ်သချင်တဲ့ စေတနာတွေ ကတော့ တူညီနေတယ်ဆိုတာ မှန်နေမှာပါ။
( ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ခံစားမှုနဲ့ ပြောတာပါလေ )
အခု ဒီ ဝေဖန်ချက်ကို ရေးသားသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တောင်းပန်ချင်တာကတော့၊ ကျွန်တော် ရေးထားတာတွေထဲမှာ၊ အမှားတွေပါနေရင်သော်လည်းကောင်း၊ စာဖတ်သူတစ်ဦးဦးရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို ထိခိုက်စေမယ့် စကားလုံးတွေ ပါသွားရင်သော်လည်းကောင်း
” စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ ” လို့၊ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောလိုက်ပါရစေ။
ဘာလို့အဲဒီလိုမျိုး ပြောရဲရသလဲဆိုရင်တော့၊ ကျွန်တော့်မှာ ( ကျွန်တော့အနေနဲ့တော့ )
ရင်ထဲက စေတနာ ( လှုံ့ဆော်မှု ) ခံစားချက် အမှန်တစ်ခုကို သစ္စာဆိုရဲတဲ့ သတ္တိရှိလိုပါဗျာ။
” အထက်မှာ ကျွန်တော်ရေးသားခဲ့တဲ့ ဝေဖန်ချက်စာသားတွေဟာ ဆရာ အတ္တကျော်ရဲ့ ရေးသားထားချက်ကို
ချေပပြီးတော့၊ လူကြီးလူကောင်းမဆန်စွာသရော်လိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အပြည့်နဲ့ ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ”
( မှတ်ချက်။ ။ ဤ ဝေဖန်ချက်တွင်ပါဝင်သော၊ စကားလုံးများ၊ အသုံးအနှုန်းများအား
သို့တည်းမဟုတ်၊ ယင်းတို့သည် မှားယွင်းနေပါက
” ၀မ်းနည်းပါတယ်ခင်ဗျား ” ။ )
19 September 2010 at 2:19 am
မကြိုက်ဘူးလဲပြော… အမြဲ အားပေးနေကျ ပရိတ်သတ်ကြီးပဲ….။ မကြာခင် ရူးတော့ မယ်…။ကိုယ်စိတ်ကိုယ် မသိဘူး..။
18 September 2010 at 9:53 pm
တိန်တိန် ………….. သေစမ်း
ရှက်တတ်လား ရှက်တတ်လား။ ရှက်တတ်ရင် ဂင်္ဂါမြစ်သောင်တကမ်းစာ သဲမြေနဲ့ အမျှ………. လဲသေ………
21 September 2010 at 3:41 pm
i dont want to say anything …but i think u can know everything if u radoctor…
Think urself ,…all the statements r true or not if u have intelligence.
22 September 2010 at 10:32 am
ဆရာဝန် တစ်ယောက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်နေ့ ဘယ်နှစ်နာရီ အလုပ်လုပ်ရပါသလဲ? တာဝန်ချိန် ၈နာရီ ပြီးလျှင် ပြင်ပဆေးရုံ ဆေးခန်းများတွင် စားဝတ်နေရေးအတွက် အလုပ်ဆက်လုပ်ရတယ်။ ချမ်းသာချင်ပြီး ဆေးရုံ ဆေးခန်းဆက်ထိုင်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလွန်ချမ်းသာသော ဆရာဝန်မရှိပါ။ လူတစ်ယောက်ပုံမှန် အလုပ်လုပ်နိုင်ချိန်ထက် ကျော်လွန်ပြီး မည်သူမှ အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ ဆရာဝန်၊ ကျောင်းဆရာမ တို့သည် အစိုးရမှပေးသော လစာဖြင့် မလုံလောက်ခဲ့လျှင် အခြားဝန်ထမ်းများကဲ့သို့ တာဝန်ချိန်တွင် လဒ်ပေးလဒ်ယူ လုပ်ရုံဖြင့် အပိုဝင်ငွေရှာလို့မရ နိုင်ပါ။ ကိုယ်ပိုင်ချိန်ပေးပြီး အပိုဝင်ငွေ ထပ်မံရှာကြရသည်။ နိုင်ငံခြားတွင် ဆရာဝန်တစ်ယောက်သည် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ချိန်တွင် ၀င်ငွေလုံလောက်စွာ ရရှိကြသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက် မှန်ကန်ကြသည်။ မှားယွင်းဆုံးဖြတ်ပါက ဆရာဝန်တွင် အပြစ်ရှိသည်။ တရားစွဲ သည်မှာ မျှတသည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် နိုင်ငံခြားမှာပဲ အလုပ်လုပ်ကြပါလားဟုဆိုလျှင် မည်သူတွေအများဆုံးနစ်နာနိုင်သလဲ။ ဖြစ်သင့်သည်မှာ အစိုးရဆေးရုံများတွင် ထိုက်သင့်သည့်အခကြေးငွေယူပြီး ဆရာဝန်တို့ကို ထိုက်သင့်သည့်လစာပေးသင့်သည်။ လူနာများသည်လည်း အစိုးရဆေးရုံများတွင်ပင် ဆရာဝန်များဧ။် ဂရုစိုက်မှုကို ရရှိနိုင်မည်။ နိုင်ငံခြားတွင်လည်း ထိုသို့ပင်လုပ်ဆောင်ကြသည်။
23 September 2010 at 5:26 pm
၁။ဆောင်းပါးအရေးအသားကို ပြောစရာမရှိပေမယ့် comment တွေအပေါ် သဘောထားကိုတော့ ပြောစရာကြီး ဖြစ်နေပါလား ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် ရှင်းပြပါရစေဦး။
“ဆရာရယ်..ဒီစာကိုဖတ်ရတာ ဆရာဝန်ဆိုတဲ့ လူတန်းစားတွေကိုတောင် တော်တော် စိတ်ပျက်လာတယ်။” “ဘာပြောရမယ်မှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူးးးး
ဆရာဝန်…. ဆရာဝန်…… ဆရာဝန်???????????” ဆိုတဲ့ သဘောထားမျိုးကိုတော့ စာရေး ဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ အရေးတယူ အမှန်ပြင်ပေးဖို့ မကြိုးစားခဲ့ဘဲ အမြင်မတူတဲ့ comment တွေရောက်လာမှ
“တစ်စုံတစ်ယောက်၊ နှစ်စုံနှစ်ယောက်၊ သုံးစုံ သုံးယောက်လောက်ရဲ့ အမှားကို အရင်းအတိုင်း ပြန်လည် ရေးသားခြင်းဟာဖြင့် ဆေးဆရာလောက၊ ဆရာဝန်လောက၊ သမားတော်လောကကြီး တစ်ခုလုံးကို သိမ်းကြုံးပြောတာ မဟုတ်တန်မှန်း မြန်မာစာ ကောင်းကောင်း ရေးတတ် ဖတ်တတ်သူတိုင်း နားလည်လိမ့်မယ်လို့ (လွဲမှားစွာ) ယူဆမိတဲ့အတွက် ဘာမှ ရှည်ရှည် ဝေးဝေး ရှင်းမပြခဲ့တာပါ။” လို့ ထွက်လာပါသလဲ ခင်ဗျာ။
ထပ်ပီး မေးရရင် ဆရာ တကယ်ရော “အတ္တ” ကျော်ပါရဲ့လားခင်ဗျာ။
၂။ ရန်ကုန် မန္တလေးဘက်မှာ စေတနာဆရာဝန်တွေ နည်း/မရှိတာကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ကပ်ပါးရပ်ပါး အသပြာဆရာဝန်တွေသာ ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ ကြာကြာမြဲမြဲ နေနိုင်ကြောင်းပါ။ ဟိုးနယ်စွန်နယ်ဖျားမှာ တောသားလုံးလုံး ဖြစ်ပီး ကိုယ်မြို့ကိုယ်တောင် မပြန်ဖြစ်တော့တဲ့၊ ဆရာ့လို ရန်ကုန်မှာ ၀ဘ်ပေါ်မှာ အေးအေးဆေးဆေးထိုင်မရေးနိုင်ကြတဲ့၊ နာမယ်မရှိ အသပြာခန်းတဲ့ဆရာဝန်လေးတွေအကြောင်းကော ခင်ဗျား။ သူတို့က ဆရာဝန်ဖြစ်ကြောင်းတောင် မေ့ထားကြပီး ထည့်မတွက်တော့ဘဲ “လူနည်းစုမကတော့တဲ့ ဆရာဝန်များ” လို့ မှတ်ချက်ချထားတာပါလား ခင်ဗျား။
၃။ နောက်ထပ်၊ နောက်ထပ် နယ်ပယ်များ (စာပေ/ကုန်စည်/ဆောက်လုပ်ရေး) အကြောင်းများကော လာဦးမှာလား ဆရာ။ ဆရာဝန်အကြောင်းက လည်ပီးရင်း လည်နေတာ “အခန်းဆက်” ဘယ်တော့ ပီးမလဲလို့ မျှော်လင့်မိပါရဲ့။
23 September 2010 at 5:33 pm
ဆက်ပီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပါ ၀င်ကလိရရင်တော့ ဆရာဟာ မှားရင် ၀န်ခံတတ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာမျိုး ပါလိမ့်။ မမြင်ဖူးလို့ပါ။
“ကျွန်တော် မြန်မာစာ ကောင်းကောင်း မရေးတတ်ဘူးဆိုတာ ထောက်ပြလိုက်တဲ့အတွက် ဆရာစည်သူနိုင့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်စာက “ဆရာဝန်တွေ”ကို “စော်ကား”တဲ့ စာလို့ ဆရာက သတ်မှတ်လိုက်တာကိုး။ အေးဗျာ… ကျွန်တော် ညံ့တာပါ။” ဆိုတာမျိုးတော့ ဟုတ်မထင်ဘူးနော့်။
24 September 2010 at 7:10 pm
ကိုစည်သူ (ယောက်ျားလေးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်)ရေ… သည်ပေါ်က စာတွေဖတ်ရုံ၊ fb ပေါ်က စာတွေဖတ်ရုံ လောက်နဲ့ တော့ ဆရာ အတ္တကျော် သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းကို မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သည်ဆရာဝန်လောကအတွက် ခံစားချက်တွေနဲ့ ဆရာမှားချင်မှားချင်မှားပါလိမ့်မယ် (ကျွန်တော်တို့ကတော့ ခံစားချက်ရှိတဲ့အတွက် မှားတယ်လို့ မမြင်မိပါ) တစ်ခုပြောရရင်တော့ ဆရာက လူအများအတွက်တော့ တစ်ခုခုအကျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတာပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀မှာ ဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကို သူတတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီပေးပြီး သူနိုင်သလောက်လုပ်နေ တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ လူဆိုတာ အမှားတော့မကင်းကြပေမယ့် လူအများအတွက် ဘာတွေလုပ်ပေးနေသလဲ ဆိုတာက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ခင်ဗျားရော လူသိရှင်ကြားအများအတွက်အကျိုးဘာလုပ်ပြီးပြီလဲလို့ ကိုယ်ကိုကိုပြန်မေးကြည့်လိုက်ပါဦး။ တစ်ထောင့်ထဲ တစ်နေရာထဲကနေတွေးတာထက် အမြင်တွေကို ဖြန့်ထုတ်ပြီးတွေးတတ်အောင် အရင်ကြိုးစား စေချင်ပါတယ်။ မှားတာလုပ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ဆီမှာကောင်းတဲ့အချက်တော့ရှိမှာပါပဲ၊ ဥပမာ- အရက်သမား တစ်ယောက်၊ ဘိန်းစားတစ်ယောက်ပေမယ့် သူတို့ဆီမှာ ကောင်းတာတစ်ချက်တော့ရှိကြမှာပါပဲ။ အဖြစ်ထက် လုပ်ရပ်က ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ စာတွေဖတ်ပြီး သိတဲ့အတွေး ရှိတဲ့လူတွေသာ နားလည်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ Fbပေါ်ကစာလောက်၊ chat ပေါ်က စာတွေလောက်ဖတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကို အချိန်ကုန်ခံ မနေပါနဲ့ စိတ်ဓာတ်အတွေးများမြင့်လာအောင် စက္ကူနဲ့ထုတ်ဝေထားတဲ့စာအုပ်တွေကို ဖတ်ပါ၊ ဘာစာပဲဖတ်ဖတ် နောင်တစ်ချိန်ကြရင်တော့ အသိတွေ၊ အမြင်တွေပြောင်းလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ အခုလို ဘေးထိုင် ဘုပြောချင်တဲ့ စိတ်တွေလည်း အနည်းနဲ့အများတော့ ပျောက်ကုန်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဘက်လိုက်ပြီး ဆရာ့ဘက်က ပြောတယ်လို့ထင်ပါလိမ့်မယ်၊ ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျား၊ ဆရာက ကျွန်တော့်ဘ၀ကို နစ်နေတဲ့ရေထဲက ဆွဲကယ်ထားပြီး လမ်းကောင်းကောင်းလျှောက်နိုင်တဲ့အထိ ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ဆရာတစ်ဆူဖြစ်နေတာမို့ပါခင်ဗျာ။
၁. စေတနာကို မယုံမကြည်လို့ ပြောနေတာ မဟုတ်ရကြောင်းပါ။ ရေးသားခဲ့တဲ့ အရေးအသားကို ဘာမျှပြောစရာ မရှိပါကြောင်း အတိအလင်း ရေးခဲ့ပြီးသားပါ။ ဆရာ့စာအုပ်တွေကိုလည်း အပြင်မှာ ဖတ်ခဲ့ ဖတ်နေဆဲပါ။ ၀င်ရေးရတာကလည်း စာပေအရ လေးစားထားတဲ့ အထိုက်အလျောက် လေးစားခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ဆက်လက် လေးစားနေချင်လို့ပါ ခင်ဗျား။ စာရေးဆရာ တစ်ဦးရဲ့ စကားလုံးတစ်လုံး ဒါမှမဟုတ် လျစ်လျှူရှုမှုတစ်ခုဟာ သူ့စာဖတ်ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ကို ညွှတ်ကျသွားစေပီး တစ်ဘ၀လုံးအတွက် ဆောင်ပုဒ် ဖြစ်သွားရင် မခက်ပေဘူးလား။ (အင်း နားလည်မယ်ထင်ရဲ့ နားလည်မယ်ထင်ပါရဲ့။)
၂.အပြင်စာဖတ်ပါဦး ဆိုတဲ့ လောကွတ်ချော် တာလေးကတော့ သဘောကျပါရဲ့။ လူကြီးမင်း ညွှန်းတဲ့ အပြင်စက္ကူနဲ့ ထုတ်တဲ့ စာပေလောကကို အရင် လေ့လာပါဦး။ အနည်းဆုံး ပန်းဆိုးတန်းထောင့်က စာပေလောကကို သွားငေး ကြည့်ပါလေဦးဗျာ။ အဘယ် အဘယ်သောစာအုပ်က မက်ဖွယ် ဖတ်ဖွယ် မှတ်ဖွယ် ရှိသလဲ ဆိုတာ။ ရှိပါတယ်ဗျ ဆိုပီး ပြလာခဲ့ရင် ပထမအကြိမ်ထုတ်ကော ဟုတ်ရဲ့လား ကြည့်ချေဦး။ ပီးမှ လာပြောလကွယ်။ အွန်လိုင်းမှာကျတော့ ဘာရလို့တုန်း လာမမေးနဲ့။ ဆရာ့ကိုဘဲ မေးကြည့်ချေ။
၃.အများအကျိုး “လူသိရှင်ကြား” (ထပ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်) အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ဘာလုပ်ပီးပြီတုန်း မေးလာတာကတော့ တယ်ကြောင်တာပဲ။ အို အမောင်”ယုယ” ဂျူး တယ်ကြိုက်သလော။ အများအကျိုး ဆောင်တယ်နဲ့ ကိုယ်ကျိုးကြည့်တယ်ဆိုတာ အဘယ်အရာကိုင်ပီး ခွဲသလဲ လေ့လာချေဦးဗျာ။ အင်း ခင်ဗျား နားလည်လာတဲ့ အထိ “စောင့်နေမယ်လို့ မပြောလိုက်ဘူး” နော် ကိုယ့်လူ။
၄.ယောက်ျားလေးထင်ပါတယ် အငေါ့လေးက ရိုးလွန်းဘူးလားကွယ် ဒီထက်ကောင်းတာလေးတွေ စက္ကူနဲ့ စာအုပ်တွေထဲ ရှာကြည့်ပါဦးလား။
ps. စက္ကူနဲ့ စာအုပ်တွေဖတ်ပါ ဆိုတော့ ရယ်ချင်ပက်ကျိ ဖြစ်သွားပီး ရေးလိုက်တာ။ အမောင်ပြောသလို ရေနစ်ခဲ့တဲ့ သူဆိုတော့ နည်းနည်း မွန်းနေ မွှန်နေရှာမှာပေါ့။ နောက်တစ်ခါ ထပ်မရေးတော့ပါဘူး အမောင်ယုယရေ။ ပျင်းသကွဲ့။
26 September 2010 at 5:42 pm
၁။ အများဖတ်တဲ့စာမျက်နှာပေါ်မှာ အကျိုးမရှိတာတွေ အပြန်အလှန်ရေးနေရတာ တောင်းပန်ပါတယ်..
၂။ ကျွန်တော်မေးလိုက်တာက အွန်လိုင်းပေါ်မှာမို့ ရိုးသားစွာမေးလိုက်တာပါ။ ဒါပေမယ့်အခုတော့ ထပ်မေးလိုက်ချင်သွားရပါတယ်။
၃။ ပန်းဆိုးတန်းထောင့်က စာပေလောကမှာတင် စက္ကူနဲ့ရိုက်တဲ့စာအုပ် ရှိတာပါလား၊ ခင်ဗျား အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရွှတ်ရှက် ဒွတ်ဒက်တတ်လို့ ဖတ်တဲ့ စာတွေတော့ ကျွန်တော်က ပညာသိပ်မတတ်လို့ မမီပါဘူးခင်ဗျာ။
၄။ လူသိရှင်ကြားဆိုတာ အများသိအောင် အရပ်လှည့်အော်တဲ့ လူသိရှင်ကြားလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါ ကျွန်တော် စာရေးတာ လောသွားလို့ ဆိုလိုရင်း ပျောက်သွားတာပါ။
၅။ ခင်ဗျားက ဦးနှောက်တစ်ခြမ်း၊ မျက်လုံးတစ်ဖက်ပဲပါပြီး သူများ တစ်ဖက်သားကို လွယ်လွယ်စွပ်စွဲတတ်တဲ့သူပဲ။(ကျွန်တော် ဂျူးစာအုပ်ကို နောက်ပိုင်းမဖတ်ဖူးပါ။) လူတစ်ဖက်သားရဲ့ ဘ၀နဲ့ ရင်းထားတဲ့ဖြစ်ရပ်ကို လည်း ဘာမှန်းညာမှန်းမသိဘဲ ခင်ဗျား ယောက်ျားတန်မဲ့ ထပ်ရိလိုက်သေး တယ်။ ခင်ဗျားစိတ်ဓာတ် တော်တော် မြင့်မြတ်တာပဲ။
၆။ ကျွန်တော်ကတော့ ပျင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ စိတ်ပျက်တာ၊ လူ့အဆင့်အတန်းချင်း မတူရင် ခွာပြီးပေါင်းလို့ရပေမယ့် စိတ်ဓာတ် အဆင့်အတန်းချင်းမတူရင် ခွာပြီးပေါင်းသော်မရပါ။
မှတ်ချက်.. ကိုယ့်ပေတံနဲ့ ကိုယ့်စံနဲ့ပဲ ကိုယ်ခွဲပါတယ်။ ဘိုင်ဘိုင်..။
30 September 2010 at 12:26 pm
ဘေးက မြင်ရတာ ၀ိတ်တန်းမတူဘူး ခင်ဗျ မြင်မကောင်းဘူး။ ဟိုက စာပေလောက(၅)ကို ဘာလို့ ဥပမာ ပေးမှန်းတောင် မသိဘူး။ ခင်များဟာ ခင်များ စာရေးဆရာကို ရိ အဲ ရေးပါလား။ သူ့ fanboyism လေးကို သူကိုင်ပြောတာ လွှတ်ပေးထားလိုက်ပါ။ ၀ိတ်တန်းမတူတဲ့သူကို ကစားနေတာ ကြည့်မကောင်းပါ။
23 September 2010 at 7:30 pm
ငယ်ငယ်တုန်းက လူငယ်တွေ စနောက်ကြရင် လူကြီးမှားရင် ဆောရီး ၊ကလေးမှားရင် ဗျောတီး ၊တဲ့
အဟဲ….ခုတော့ ဆရာဝန်တွေ မှားရင် တော့…ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးး
အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ်တာဝန်ယူ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တစ်ခုအပေါ်မှာ
အာရုံစူးစိုက်မှု ရှိရင် အကောင်းဆုံးပေါ့
ဆောရီးဆိုတာ ပြောလိုက်တာ လွယ်သလောက် တစ်ဖက်မှာ
နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေ မရေမတွက် နိုင်အောင် ခံရနိုင်ပါတယ်။
PSးဆရာဝန်ကိစ္စတစ်ခုထဲ မဟုတ်ပါဘူး။ အရာအားလုံးကို ဆိုလိုတာပါ။
24 September 2010 at 6:25 pm
ကျွန်မမှာ ဆီးချို၊ သွေးချိုဖြစ်နေတဲ့ အဒေါ်တစ်ယောက်ရှိတယ်။ တစ်နေ့ကျ သူ့ ခြေထောက်မှာ အနာပေါက်တော့ အဒေါ်က ဆီးချိုကြောင့် အနာမကျက်မှာကို အရမ်းစိုးရိမ်ပြီး ဒေါက်တာ တင့်ဆွေလတ်ဆီကို အပြေးအလွှားသွားပြတယ်။ အဲဒီ့ ဆေးခန်းက လူနာတွေဆီက ရတဲ့ငွေကို လှူပေးတဲ့ charity organization တစ်ခု။ ဒေါက်တာကလည်း သူ့လုပ်အားနဲ့ တတပ်တအား ပါဝင်တယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီ့ဆေးခန်းမှာထိုင်တယ်။ အဒေါ်သွားပြတော့ ခြေထောက်က အနာကိုတောင်သေချာမကြည့်ဘူး၊ ဘာဆေးသောက် ဘာဆေးသောက်ဆိုပြီး ရေးပေးလိုက်တာ နှစ်မိနစ်နဲ့ သုံးမိနစ်ကြားမှာ ပြီးသွားတယ်။
ကျွန်မအဒေါ်ကလည်း တော်တော်စိုးရိမ်တတ်တယ်။ သူ့ စိတ်ထဲမှာ သိပ်ဘ၀င်မကျတာနဲ့ နောက်တစ်ခါ ဒေါက်တာတင့်ဆွေလတ်ထုိုင်တဲ့ ပန်းလှိုင်ဆေးရုံရဲ့ ပြင်ပလူနာဌာနမှာ သွားပြပြန်တယ်။ အဲ … ပန်းလှိုင်ဆေးရုံမှာကျတော့တဲ့ .. သူ့ ခြေထောက်က အနာကို တယုတယ ကိုင်ပြီး ဂရုတစိုက်ကြည့်နေလိုက်တာများ ရည်းစားမျက်နှာအတိုင်းပဲတဲ့။
အဲဒါ တစ်ပတ်အတွင်းမှာ လူနာတစ်ယောက်တည်းရဲ့ အနာတစ်ခုတည်းကို ဆရာဝန်တစ်ယောက်တည်းက ဆေးခန်းနှစ်ခုမှာ အလွန်သိသာတဲ့ ကွာခြားလွန်းလှတဲ့ ဆက်ဆံမှုနဲ့ ဆက်ဆံလိုက်တာပါပဲ။
ကျွန်မအဒေါ်လိုမျိုးပဲ “အစိုးရဆေးရုံ” မှာကျတော့ တစ်မျိုး၊ “ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်း” ကျတော့ တသွယ် ဆရာဝန်တစ်ယောက်တည်းက ဆက်ဆံမှုတွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ ဆက်ဆံတာကို လူတော်တော်များများ ခံစားသိနဲ့ သိဖူးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ ခြင်္သေ့က စကားပြောတာပေါ့လေ။
Myo Myat Minn says:
29 September 2010 at 7:13 am
အခုလိုမျိုး အခြေအတင်တွေ ဖတ်ရတော့ ရင်ထဲ တစ်မျိုးတော့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်က တော်တော်လေးကို စကားမတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှ အထင်မကြီးသလို ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှ လည်း အထင်သေးတဲ့အထဲတော့ ကျွန်တော်မပါတတ်ပါဖူး ကိုယ့်လက်ရှိအတိုင်းပဲနေတယ်ပေါ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း မှန်ကန်တယ်လို့မထင်မိပေမယ့် ယုံကြည်ချက်တော့ရှိလှည့်ပါတယ်။ ဆေးလောကရဲ့အကြောင်းကို ဆေးလောကထဲက ဂရုမစိုက်နိုင်မှုတွေကို ဆေးလောကသားတွေလောက် ပိုသိတဲ့လူရယ်လို့ ရှိမယ်မထင်ပါဖူး Sorry ဆိုတဲ့ စကားနှင့် ကျော်သွားနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် သူတို့ဖက်က ကော ဘယ်လိုခက်ခဲတဲ့ အရာဆိုတာ ရှိခဲ့မယ်ဆိုတာကော ဆရာတွက်မိပါသလား။ ရှိချင်မှလည်းရှိပါမယ် ဒါပေမယ့်ရှိခဲ့မယ်လို့ကော ဆရာတွက်မိသေးလားဗျ။ တစ်ခုပြောကြည့်ချင်လို့ပါ။ မမှားဖူးတဲ့လူရယ်လို့ မရှိပါဖူး။ နာရီတောင် တစ်နေ့မှာ ၂ ခါမှားသေးတာပဲ (ဆရာတာရာမင်းဝေ)ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ ဆရာ့မိန်းမကို ခွဲစိပ် တဲ့အချိန်မှာ မှားယွင်းမှုဖြစ်ပြီး ဆီးအိမ်ထိုးမိတယ်။ အကယ်လို့သာ အဲဒီ သွေးထွက်နှုန်းကို မကယ်နိုင်ခဲ့ရင် ဆရာနောက်ထပ် ကလေးမရမှာထက် ဆရာ့မိန်းမကိုပါ ဆုံးရှုံးမှုရရှိမှာပါ။ Sorry တစ်ခွန်းပြောခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် အဲစကားမပြောခင်မှာလည်း ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခဲ့မှုဆိုတာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဆေးလောကသားဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဝင်ရေးမိတာပါ။ တခုပေါ့ ဆရာ့ကိုတိုက်ခိုက်တာတော့မဟုတ်ဖူး ဒါပေမယ့် ဆရာကထင်ခဲ့ရင်လည်း ဝမ်းမနည်းဖူး။ ဆရာဒီဆောင်းပါးကိုရေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် မြင်တဲ့လူတိုင်းရဲ့ အမြင်ချင်းမတူပဲ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်လည်း မတူပါဖူး။ တစ်ချို့က ဆရာဖြစ်သလို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးရေးတယ်မမြင်ပဲ အားလုံးကိုတစ်သတ်မှတ်တည်း သတ်မှတ်မယ့်ခံစားချက်မျိုးရှိမယ့်လူလည်းရှိပါတယ် ဆရာ။ အဲလိုလူမျိုးတွေအတွက်ကော ဆရာ ဘယ်လိုမျိုးပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင် ဆရာပြုပြင်မလဲ။ အခုရေးထားသလို ဆရာရေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် တစ်ချို့က ဆရာဝန်မုန်းတီးရေးဖြစ်သွားမယ် ဆရာဝန်တွေကလည်း ပိုမိုဂရုစိုက်လာမယ် ( ဘာလို့ဆို ဆရာက ဆရာဝန်တွေကို ကောင်းသွားအောင်လို့ရေးတာကို ) အဲမှာ တယူသန်သတ်မှတ်သွားတဲ့လူတွေ အလကားနေရင်း ဆရာဝန်ဆိုတာတွေကို မုန်းသွားမယ့်လူတွေအတွက် ဆရာဘယ်လိုအပိုင်းက တာဝန်ယူမှုဆိုတာမျိုး ရှိမလဲ သိချင်ပါတယ်။ စေတနာမထားလွန်းတဲ့ဆရာဝန်ရယ်လို့တော့မရှိပါဖူး အားလုံးလူအချင်းချင်းပါပဲ ။ (အကယ်လို့သာ အောက်က ဆရာပြထားတဲ့နောက်ထပ် ဖြစ်ရပ်မှန် ၂ ခုအတိုင်းသာ တကယ်ကိုမှန်ရင်ပေါ့၊ ဆရာ့မိတ်ဆွေက အစိတ်အပိုင်းတခုကိုခွဲထုတ်တဲ့အချိန်မှာ သေလုမျောပါး အရေးကြီးတဲ့လူနာက ဆရာ့ မိန်းမသာဖြစ်ခဲ့ပြီ ဆိုပါစို့။ ဆရာဒီ ဆောင်းပါးကို ရေးဖြစ်ပါ့မလား ?? ဥပမာ နှိုင်းယှဉ်ချက် ပြင်းထန်သွားရင် ခွင့်လွတ်ပါ ပိုမိုတွေးမိအောင် ရေးချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အရိုးသားဆုံးဝန်ခံတာပါ)
Kay Khine says:
3 October 2010 at 12:51 pm
ကို မျိုးမြတ်မင်း ရဲ့ စကားလုံးတွေ ကို ထောက်ခံပါတယ်။ လူထုတွေ ဆရာ ၀န်တွေကို မုန်းတီးစေတဲ့ အရေးအသားတွေ ။comment တွေပါနေတယ်လေ။ ကောင်းစေချင်တဲ့စေတနာလား၊၊
10 October 2010 at 7:25 am
လူနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် မတစ်ရာသားတွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ ဆရာဝန်တွေကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်တောင် Customer ဆိုတဲ့လူတန်းစားနဲ့ ဆက်ဆံနေရတော့ တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်တိုစိတ်ညစ်ပြီး အမှားပါတတ်ပါတယ် (မောက်မာသော ဆရာဝန်များကိုရည်ရွယ်ပါတယ်)။မနှိုင်းကောင်း နှိုင်းကောင်း ဘတ်စ်ကား စပါယ်ရာတွေလိုပဲ လူအမျိုးမျိုးနဲ့ထိတွေ့လာရတော့ တစ်ခါတစ်ရံ အမှားအယွင်းလေးတော့ ရှိလာတာပေါ့။ စိတ်တိုမိမယ် ဆဲဆိုမိမယ် အမှားလုပ်မိမယ်ပေါ့ ပိုက်ဆံကျတော့ ပြန်မအမ်းချင်ဘူး ဟဲဟဲ(အကြွေမရှိလို့နေမှာပါ)။ ကျနော်တို့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာတော့ အပေါ်ကွန်မန့်များပြောသလို အပြစ်မြင်စရာဖြစ်နေတဲ့ ဆရာဝန်တွေ များနေတယ်ဗျာ။ ဆရာဝန်မကောင်းကြောင်း ဇာတ်လမ်းတွေက တစ်ထောင့်တစ်ည ပုံပြင်ဖြစ်လာတယ်။ လူနာဖက်က မသိနားမလည်တာတွေကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်း ပါတာပေါ့လေ။ အရိုးကျိုးလို့ဆေးရုံတက်တာ အသက်ပါသွားတဲ့လူ၊ ဆေးခန်းသွားရင် ရွှေဆွဲကြိုးဝတ်သွားမှ ခပ်ငေါက်ငေါက်လေး အပြောခံရတာ လွတ်ကင်းတဲ့သူ၊ လူနာပြောတာ လက်ခံပဲ မတည့်တာအတင်းထိုးပြီး ပြီးမှဖြေဆေးထိုးတတ်သူ အစရှိသဖြင့်ပေါ့ နားမဆန့်ပါဘူး။ ဘယ်ဆရာဝန်ကြီးကတော့ ကောင်းလိုက်တာဆိုတာတွေ ကြားရနည်းလာပါတယ်။ အပြင်အထူးကုမှာပြတယ်ဆိုတာ ငွေကုန်ရတာနဲ့တန်အောင် လူနာသက်သာစေချင်လို့ပါ။
ငွေကုန်ပြီး ဘာမှမဟုတ်တာနဲ့လူသေတယ်ဆိုတော့ ဆရာဝန်မကောင်းတာဖြစ်လာပါတယ်။ လူပိန်းတွေးနော်။
ဒီတော့ လူပိန်းတွေကို ဆရာဝန်ဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာ ပြောပြဖို့တော့လိုမယ်။ sorry နဲ့တော့မလုံလောက်ဘူး။ ကိုင်တွယ်ရတဲ့ ပစ္စည်းက သက်မဲ့မဟုတ်ဘူး။ သက်ရှိပစ္စည်းတွေ၊ ပြီးစလွယ်လုပ်လို့မရဘူး။ ပြီးစလွယ်လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိရင် မြင့်မြတ်ပါတယ် ကြွေးကြော်ပြီး ဆရာဝန်မလုပ်နဲ့။
ကျနော်သိတဲ့ ကြုံဖူးခဲ့တဲ့ သဘောကျခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်တွေဆိုတာ ပြီးစလွယ်မလုပ်ကြဘူး။ အခုပြီးစလွယ်ဆရာဝန်တွေများနေတယ်။ ဒါကိုထောက်ပြတာ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ တစ်ခြားလောကကိုမထောက်ပြဘူး၊ လူ့အသက်မဟုတ်လို့။လူ့အသက်က အဖိုးအတန်ဆုံးပဲ။ ဒါဆို လူနာမသေသင့်ပဲသေတဲ့ကိစ္စ ဘယ်သူ့ အပြစ်ဖို့ရမလဲ။ ထောက်ပြတာ မကြေနပ်ဘူးဆိုရင် ဆရာဝန်လည်း မပြောရဘူးဆိုရင် ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေရမယ့်သဘောဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ်ဖြစ်တဲ့အလှည့်ရောက်လာရင်ဘယ်လိုအသံထွက်မလဲ စောင့်ကြည့်ချင်တယ်။ ကိုယ်ခံရမှ အခုပြောတဲ့လူတွေထက် ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ဖြစ်လာရင် အော်ရယ်မှာနော် အားမနာဘူး။
23 October 2010 at 10:06 am
ဆရာရေ၊ ကျနော်လဲ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပါပဲ။ ကျနော်ကျတော့ အပေါ်က ဆရာဝန်တွေလို ဆရာ့ဆောင်းပါးကို အဆိုးမမြင်ဘူးဗျ။ ဆတ်ဆတ်ခါလဲ မနာဘူး။သိမ်းကြုံးရမ်းတာမှ မဟုတ်တာ။ တကယ်လဲ ဟုတ်နေတာပဲ။
(ကျနော်က သူတို့တွေထက် အသက် ၁၀ နှစ်မက ကြီးတာလဲ ပါမှာပေါ့) အဲ..ဒါပေမယ့်..ဒီလောက အကြောင်း သူတို့်လို နောက်ပေါ်လေးတွေထက်.. အများကြီးထဲထဲဝင်ဝင် သိတာ၊ လုပ်ခဲ့တာတော့ အမှန်ပဲဗျ။
ကျနော် အဖေ့သူငယ်ချင်း အရက်အမြဲသောက်လေ့ ရှိသူ၊ ငှက်ဖျားဖြစ်တော့..ဆရာဝန်က သူ အရက်သောက်သလား တစ်ခွန်းမမေးဘူး၊ သူ အသဲ ကောင်းနေရဲ့လား လုံးဝမစစ်ဆေးဘူး။ (အသဲ ပုံမှန်ရှိမရှိ အာထရာဆောင်း နဲ့ သို့မဟုတ် အသဲအင်ဇိုင်းတွေ စစ်လို့ရတယ်) ငှက်ဖျားဆေးတွေ တန်းပေးလိုက်တာ…သူ့အသဲက မကောင်းနေတော့ သေပါရောလား။
ကျနော့် ဘကြီးအရင်း သွေးတိုးသမား ကို၊ မျက်စိဆရာဝန်က ဆေးပေးလိုက်တာ၊ သွေးတိုးရှိလား တစ်ခွန်းမမေးဘူး။ ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးက သွေးပေါင်တအားတက်တော့၊ သွေးတက်ပြီး သေရော။
အမှန်က သူတို့တွေ competent မဖြစ်တာ။ ကျောင်းမှာ လူနာကို History မေးရင် ဘာတွေ မေးရမယ် ဆိုတာ
သင်ပေးလိုက်တာပဲ။ အချိန်မပေးနိုင်တာ၊ ဘာညာတွေ လာမပြောနဲ့လေ။ ကိုယ့် Profession က လူ ဆိုတာကို ကုသနေရတာ၊ လူနာ အသက်က ကိုယ့်လက်ထဲမှာ။ အချိန်ပေး ကို ပေးရမယ်။ လူနာကို ပြောသင့်၊ မေးသင့်တဲ့ စကားကို ပြောကို ပြောရမယ်၊ မေးကို မေးရမယ်။
သိမ်မကြာတင်လေးက..အရှေ့ပိုင်းဆေးရုံမှာ မီးပျက်ည မှာ မွေးခန်းထဲ မှာ ဟောက်ဆာဂျင်က ချက်ကြိုးဖြတ်တာ၊ ကလေး ခြေထောက်လေး ထိပြီး၊ ခြေသန်းလေး ပျက်သွားပါရောတဲ့။သူ.သားသမီး၊ ကိုယ့်သားသမီးဗျာ၊ မိဘ လုပ်သူ ဘယ်လို ခံစားရမလဲ။
တကယ်တော်တဲ့၊ အနစ်နာခံတဲ့ ဆရာတွေလဲ အများကြီးပါ။ နူနာ ရောဂါသည်တွေကို ဘာလက်အိတ်မှ မပါဘဲ၊
ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ် ကုသပေးတဲ့၊ သူ့ကိုယ်သူတောင် နူနာ ရောဂါပိုး မစစ်တော့တဲ့ အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက်လဲ ရှိပါတယ်။
ကောင်းတဲ့သူတွေ အကြောင်းပြောတာထက်၊ မကောင်းတဲ့သူတွေ၊ အမှားလုပ်တဲ့ ဆရာဝန်တွေအကြောင်း များများ
ထောက်ပြဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီ Profession သည် အမှားခံတဲ့ profession မဟုတ်လို့ပါ။
Do No Harm ဆိုတာ Hippocratic oaths ရဲ့ အခြေခံပါ။
Khin Thant Zin says:
LeaveaReply to mydaydream89 Cancel reply
Previous Previous post: Success and Value
Next Next post: A letter fromagullible girl